မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူထက်မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့ပိုအားနည်းချက်ရှိပါသလား တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှအထောက်အထားများ (၂၀၀၉) - သင့် ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှု
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ထက်မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့ပိုအားနည်းချက်ဖြစ်ပါသလား တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်သက်သေအထောက်အထား (2009)
Psychopharmacology (Berl) ။ 2009 စက်တင်ဘာ; 206 (1): 1-21 ။ EPub 2009 ဇွန် 23 ။
Schramm-Sapyta NL, Walker က QD, Caster JM, Levin ED, Kuhn CM.
Duke တက္ကသိုလ်, Durham, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
epidemiological သက်သေအထောက်အထားအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူစမ်းသပ်စတင်သူတွေကိုပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (ကျင်းပေါင်း) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုသို့သော်ဤဆက်စပ်မှု causation အာမခံချက်မပေးပါဘူး။ စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည့်အတွက်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ, စမ်းသပ်ခြင်းကြောင်းကျိုးဆက်စပ်များအတွက်ပလက်ဖောင်းကိုဆက်ကပ်။ အတော်များများကတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင် neuroplasticity မြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်တားအံ့သောငှါမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများဖြေရှင်းရန်။
ကျနော်တို့ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ preclinical စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြ အပျိုပေါက် ကြွက်အကြိုး, အားဖြည့်, ဆန္ဒရှိ, locomotor နှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်သက်ရောက်မှုမှ differential အထိခိုက်မခံဖြစ်ကြ၏။
အဆိုပါကြွက်မော်ဒယ်စာပေတသမတ်တည်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှု၏ချိန်ခွင်လျှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဆုလာဘ်ဆီသို့တင်ရန်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သို့သော်တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်တသမတ်တည်းတိုးမြှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမပါဘူး: မိမိဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှုအပေါ်အသက်အရွယ်သက်ရောက်မှုမူးယစ်ဆေးများနှင့်နည်းလမ်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, မြီးကောင်ပေါက် compulsive မူးယစ်ဆေးရှာဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ရာဆုတ်ခွာသက်ရောက်မှုမှတသမတ်တည်းလျော့နည်းထိခိုက်မခံဖြစ်ကြ၏။ အာရုံခံ function ကိုဆန်းစစ်လေ့လာရေးအများအပြားအသက်အရွယ်-related သက်ရောက်မှုထင်ရှားပေမယ့်ဤသက်ရောက်မှုချိတ်ဆက်ရသေးရှိသည် အားနည်းချက် ကျင်းပေါင်းရန်။ အတူတူယူတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမြှင့်တင်ရန်ရသောအချက်များအကြံပြုပေမယ့်သက်သေအထောက်အထားရောဂါဗေဒဆေးရှာသက်ဆိုင်သော အပြုအမူ ချို့တဲ့နေပါတယ်။ တစ်ဦးကခေါ်ဆိုခရောဂါဗေဒမူးယစ်ဆေးရှာ၏အမူအကျင့်မော်ဒယ်များကိုသုံးပြီးဒီကွာဟမှုကိုဖြေရှင်းရန်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအဘို့နှင့် neurobiologic လေ့လာမှုများပိုပြီးတိုက်ရိုက် Sud မှအသက်သက်ရောက်မှုလင့်ထားသည်ရန်အဘို့အဖန်ဆင်းထားသည် အားနည်းချက်.
keywords: စွဲလမ်း, အရက်, ကင်း, ဖက်တမင်းဆေးပြား, နီကိုတင်း, Cannabinoids
ထိုကဲ့သို့သောကင်း, စိတ်ကြွဆေး, နီကိုတင်း, အရက်နှင့်ဆေးခြောက်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးလေ့သူတို့ရဲ့ mood- နှင့်စိတ်ကို-ပြောင်းလဲဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဤရွေ့ကားတ္ထုများမှာလည်းစွဲလမ်းဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိသည်။ တချို့လူတွေမှာတော့ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကို "စွဲ" သို့မဟုတ် "မှီခို" အနုတ်လက္ခဏာကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေးအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းဆိုလိုသည်မှာ compulsive နှင့်ထပ်တလဲလဲမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူစေပါတယ်။ သို့သော်အပြုအမူ၏ဤအမျိုးအစား (ကိုတွေ့မြင်သမျှသောအသုံးပြုသူများကိုဖြစ်ပေါ်ပါဘူး သဖန်းသီး။ 1) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုသက်ရောက်မှုကြိုးရှာတွေ့နှင့်အနာဂတ်အတွက်သူတို့ကိုရှောင်ရှားကြဘူးသူကိုလူအတော်များများ။ အချို့လူများကမူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆိုးကျိုးများကိုခံစားခြင်းနှင့်အစဉ်အဆက်မှီခိုဖြစ်လာစရာမလိုဘဲ recreationally သူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။ အခြားသူတွေအဘို့, သို့သော်မူးယစ်ဆေး (ကြည့်ရှုသူတို့၏ဘဝအပေါ်အစွမ်းထက်ထိန်းချုပ်မှုရရှိအပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအကျန်းမာရေးရာအစားထိုးရန်စေခြင်းငှါ သဖန်းသီး။ 1) ။ အလွဲသုံးစားမှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမူးယစ်ဆေးဝါးများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းစတင်သူကိုလူများ၏အများစု။ epidemiological လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုပြဿနာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အစောပိုင်းစတင်ခြင်းထူးခြားရောဂါဗေဒအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးပြဿနာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တစ်ဦးချင်းဖွယ်ရှိစေတူညီသောမျိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေလည်းအစောပိုင်းအစပျိုးဖို့သူတို့ကိုဖွယ်ရှိစေခြင်းရှိမရှိမှကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ငြင်းခုံလည်းမရှိ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုစတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ပြီးသောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်ရလဒ်များကိုအကျဉ်းချုပ်။
အစဉ်အဆက်ညွှန်ပြချက်မူးယစ် (ကြိုးစားခဲ့ကြသူ 12 နှစ်ပေါင်းအသက်ကျော်အမေရိကန်လူဦးရေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းထိပ်ဆုံးနံပါတ်တစ်ခု, အလင်းမီးခိုးရောင်စက်ဝိုင်း); အဘယ်သူသည် (အတိတ်ကာလတစ်လအတွင်းညွှန်မူးယစ်ဆေးကိုသုံးအလယ်တန်းအရေအတွက်ကို, မှောင်မီးခိုးရောင်စက်ဝိုင်း); ယင်းအပေါ်မှီခိုဘို့စံတွေ့ဆုံရန်တဲ့သူ ...
စည်းကမ်းချက်များ "စွဲ", "မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု," နှင့် "မူးယစ်ဆေးမှီခို" ဟုအဆိုပါအရပ်ဒေသ၌အခြေတည်သောအတွက်အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုကြသည်နှင့်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဗေဒဆိုင်ရာနှင့် neuroscience စာပေများတွင်အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးကွဲပြားကြသည်။ သူတို့က Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ဗားရှင်း IV (DSM-IV 1994) ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲများကသတ်မှတ်ကြပါတယ်အဖြစ်ရှင်းလင်းပြတ်သား၏မျက်နှာကို ထောက်. , ငါတို့သည်နှစ်ခုပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (ကျင်းပေါင်း), မူးယစ်ဆေးမှီခိုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုရည်ညွှန်းပါလိမ့်မယ်။
မှုများထပ်တလဲလဲပစ္စည်းဥစ္စာအလုပ်မှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍတာဝန်ဝတ္တရားဖြည့်ဆည်းဖို့ပျက်ကွက်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း, ကျောင်း, ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာ
အရေးကြီး, လူမှုရေးလုပ်ငန်းခွင်, ဒါမှမဟုတ်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်အဥစ္စာအသုံးပြုမှုအထိပေးထားသောသို့မဟုတ်လျှော့ချနေကြသည်
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားခဲ့ဖွယ်ရှိသော persistent သို့မဟုတ်မှုများထပ်တလဲလဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိခြင်း၏အသိပညာကြားမှဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်
မူးယစ်ဆေးမှီခိုများအတွက်စံနှစ်ယောက်ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်သည်းခံစိတ်, ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေကနေတရပ်ပေါ်ပေါက်လာနှင့်တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်တိုင်းတာရန်အတော်လေးလွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များဆက်စပ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့နယူးအပြုအမူနည်းလမ်းများ, မော်ဒယ်တိုးမြှင့်စားသုံးမှု, အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းစားသုံးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများအကြားရွေးချယ်မှုမှာအောင်မြင်မှုချဉ်းကပ်နေကြသည်။
အဆိုပါ DSM-IV စံတဲ့လူနာရောဂါလက္ခဏာတွေကိုသို့မဟုတ်ကုသမှုလိုအပ်ပါတယ်သည့်အခါ Clinician အသုံးပွုနိုငျကွောငျး "လျှပ်တစ်ပြက်" ပေးသညျ။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခို (မကြာခဏမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အတူထပ်အများအပြားသတ်မှတ်ထားသောအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ, အမှန်တကယ်တစ်တိုးတက်သောရောဂါဖြစ်ပါသည်Kreek et al ။ 2005; မြင် သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 1 နှင့် and2) ။2) ။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုသေချာပေါက်အဖြစ်စမ်းသပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကစတင်ခဲ့သည်; အဘယ်သူမျှမလူတစ်ဦးကပထမဦးစွာမူးယစ်တာခြင်းမရှိဘဲမှီခိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လူအများစုဟာမူးယစ်ဆေးဝါးများ (အနညျးဆုံးအရက်သို့မဟုတ်ဆေးရွက်ကြီး) သူတို့၏အသက်တာ၌တစ်ချိန်ချိန်, ပုံမှန်အားနှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်နှစ်တာကာလအတွင်းစမ်းသပ်စောစော 20s (ကြိုးစားကြChen နှင့် Kandel 1995) ။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အပန်းဖြေအခြေအနေများအောက်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြန်လုပ်ပါ။ အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်ပေမယ့်အသုံးပြုသူကထိန်းချုပ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်။ အပန်းဖြေအသုံးပြုသူများသည် (မိမိတို့၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများအဘို့မဟုတ်, မလှူထဲကမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရှာခြင်းKalivas နှင့် Volkow 2005) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခိုအသုံးပြုခြင်းကိုအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည့်အခါပေါ်ထွက်လာကိုစတင်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ကနေအပန်းဖြေအသုံးပြုမှုကိုမှမှီခိုဖို့တိုးတက်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမူးယစ်ဆေးများကကွဲပြားခြားနားသည်။ ပုံ 1 အစဉ်အမြဲနေတဲ့အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးကိုယူတော်မူကြောင်းကိုအသက်အရွယ် 12 ကျော်ယူအက်စ်အေ၏လူဦးရေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းသရုပ်ဖော်ထားတဲ့အားဖြင့်ဤအမှတ်တစ်အမြင်အာရုံအနက်ကိုပေးသည်မှန်မှန်ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ, မှီခိုသည်။ မှီခိုဖွံ့ဖြိုးသောရာခိုင်နှုန်းကမူးယစ်ဆေးဝါးအားဖြင့်ကွဲပြားခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဥပဒေရေးရာအချက်များကလွှမ်းမိုးနေသည်သော်လည်း, မှီခိုလူဦးရေတစ်မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူစမ်းသပ်ခဲ့ကြသောသူတို့၏အမျိုးအသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအစုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အခြားသူများကိုသက်သက်သာအပန်းဖြေဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်စဉ်အချို့မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူများကျင်းပေါင်းဖွံ့ဖြိုးဘူးအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးက key ကိုသုတေသနပြုမေးခွန်းတစ်ခုကိုထိုကြောင့်, ပါသလဲ
မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့တိုးတက်မှုအတွက်အဆင့် (ထောင့်မှန်စတုဂံ) နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်စင်နှင့်ဆက်စပ်သောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ (ဘဲဥပုံ, ကိုယ့်ကိုယ်ကို-admin ရဲ့, Self-အုပ်ချုပ်ရေး)
epidemiological လေ့လာမှုများအပန်းဖြေအသုံးပြုသူများနှင့် Sud ရှိသူများအကြားခြားနားချက်ကိုရှင်းပြအချို့အချက်များသို့ထိုးထွင်းသိမြင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုမှာမကြာခဏလေ့လာတွေ့ရှိဆက်စပ်မှု (လူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာအသုံးပြုမှုကိုစတင်သူတွေကိုကျင်းပေါင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုများပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်Robin နဲ့ Przybeck 1985; Meyer နှင့် Neal 1992; Lewinsohn et al ။ 1999; Prescott နှင့် Kendler 1999; DeWit et al ။ 2000; Lynskey et al ။ 2003; ဘရောင်း et al ။ 2004; Patton et al ။ 2004) နှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ကနေပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းမှပိုမြန်တိုးတက်လေ့ (Chen နှင့် Kandel 1995; ချန် et al ။ 1997) ။ ဤသည်မှာဆက်စပ်မှုပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်များ၏အာရုံစူးစိုက်သည်။ သည်အခြားအထောက်အကူပြုအချက်များ (ကျင်းပေါင်းမိသားစုသမိုင်းများပါဝင်သည်Hoffman ဟာနှင့် Su 1998; ဟေးလ် et al ။ 2000) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှုရောဂါ, schizophrenia နှင့်အမူအကျင့်ရောဂါ (အဖြစ် psychopathologyDeykin et al ။ 1987; စယ် et al ။ 1994; Burke က et al ။ 1994; အာဗြဟံနှင့် Fava 1999; Compton et al ။ 2000; Shaffer နှင့်ဟေဗာသည် 2002; Costello et al ။ 2003) ။ ဤအအချက်များအားလုံးသည်များမှာ ဆက်စပ် အတူကျင်းပေါင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အန္တရာယ်တိုးလာပေမယ့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လူ့လူဦးရေအတွက်ဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့လူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေဟုတ်မဟုတ်၏မေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ကြိုးစားမှုဆနျးစစျလိမျ့မညျ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် သို့မဟုတ် Sud ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မျှသာမှာလည်းတိုက်ဆိုင်မှု။
ဒါဟာကျနော်တို့အရက်နှင့်အတူ "ငယ်ရွယ်။ " စမ်းသပ်နေဖြင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုသတ်မှတ်ဤအချက်မှာအလွန်အရေးပါသည်ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ဆေးခြောက်ပုံမှန်အားဖြင့် (ထိုဆယ်ကျော်သက်နှစ်တာကာလအတွင်းစတင်SAMHSA 2008) ။ အသက်အရွယ် 18-20 န်းကျင်အရက်ထိပ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်လူကြီးသို့ငြင်းပယ် (Chen နှင့် Kandel 1995) ။ အသက်အရွယ် 19 နှင့် 22 အကြားအနည်းငယ်အကြာမှာဆေးခြောက်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုထိပ်, (Chen နှင့် Kandel 1995) ။ ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းလယ်ပိုင်း 20s ဖို့အစောပိုငျးတှငျထိပ်လည်းလူကြီးသို့ငြင်းပယ် (Chen နှင့် Kandel 1995) ။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ပုံမှန်အသက်အရွယ်-related ပုံစံနှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်စောစော 20s အတွက်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ကပါဝင်ပတ်သက်, ဒါတဲ့သူတွေစမ်းသပ်မှုသည်ဤပုံမှန်ကြိမ် (နှောင်းပိုင်းကငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒါမှမဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်အတွက်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်သို့မဟုတ်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးအရက်နှင့်စီးကရက်) အန္တရာယ်မှာအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းမတိုင်မီ ။ များစွာသောလေ့လာမှုတွေများအတွက် cutoff အဖြစ် 15 နှစ်ပေါင်းမတိုင်မီစတင်ခြင်းတစ်ခုအသက်အရွယ်ကိုအသုံးပြုဖို့နေစဉ် "အစောပိုင်းစတင်ခြင်း" ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်: အငယ်အသုံးပြုသူများအကျင်းပေါင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
စတင်ခြင်းနှင့် Sud တာဝန်ယူမှု၏အသက်အရွယ်ကြားရှိပြောင်းပြန်ဆက်စပ်မှုကောင်းစွာသောလူသားမြား၌တည်နေသည်နေစဉ်, ဒါကြောင့်အစောပိုင်းအသုံးပြုမှုကိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ရှိမရှိကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြမထားဘူး။ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်စမ်းသပ်ဖို့ epidemiological လေ့လာမှုများခက်ခဲများနှင့်ရှားပါးနေသောအမွှာသို့မဟုတ် longitudinal လေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဝတ္ထုများနှင့်အတူဆိုသော်ငြားနှစျခုအမွှာလေ့လာမှုများ, ပဋိပက္ခဖြစ်ရလဒ်များကိုအတွက်ရလဒ်ပါပွီ။ အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုများအတွက်အန္တရာယ်ဆန်းစစ်တစ်ခုမှာကြီးမားသောလေ့လာမှု (စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခံခဲ့ရကြောင်းအစီရင်ခံပေမယ့်အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မရPrescott နှင့် Kendler 1999) ။ အစောပိုင်း-စတင်ခြင်းဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းစတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ် (နောက်ပိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုပြဿနာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံဘို့စိတ်တိုးပွားခဲ့ကြသူအအမွှာ၏ဆနျ့ကငျြ, သေးငယ်တဲ့လေ့လာမှုLynskey et al ။ 2003) ။ ထို့ကြောင့်ကျဲသက်သေအထောက်အထားများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများပြောပြတယ်အဖြစ်အစောပိုင်း-စတင်ခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်. epidemiological စာပေအတွင်းဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိနေဆဲဟုရှိသေး၏။ လူ့လေ့လာမှုများ (မိသားစုသမိုင်းနှင့် psychopathology အစောပိုင်းစတင်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ပြသTarter et al ။ 1999; Franken နှင့် Hendrik 2000; McGue et al ။ 2001a, b) ။ ဤအဇီဝဗေဒနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးကျိုးများသလား, ဒါကြောင့်, ကျင်းပေါင်းမှအားနည်းချက်တိုးမြှင့်ဖို့အစောပိုင်းစတင်မှတဆင့်လုပ်ကိုင်? သို့မဟုတ်တစ်မိသားစုသမိုင်းနှင့် / သို့မဟုတ် psychopathology နှင့်အတူအသုံးပြုသူများအကျင်းပေါင်းသူတို့အစပျိုးသည့်အခါမျှမကိစ္စဖွံ့ဖြိုးမလဲ ဤမေးခွန်းများကိုလူ့လေ့လာမှုများအတွက်ဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲသည်။ အပြည့်အဝအကြာတွင် Sud စောစောမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဖြေရှင်းရန်, တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်များလိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များစမ်းသပ်ထိန်းချုပ်မှုများ၏ကွဲပြားအားသာချက်ရှိသည်။ လူ့လေ့လာမှုများအတွက်ဤအခြေအနေများအသုံးပြုသူကဆုံးဖြတ်ကြသည်, သော်လည်းစမ်းသပ်ကျပန်း, ကနဦးထိတွေ့မှုများ၏အသက်, အဖြစ်မူးယစ်ဆေး, ဆေးထိုး, ကြာချိန်နှင့်ထိတွေ့မှု၏အချိန်ကိုက်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအများကြီးအဖိုးတန်သတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ သို့သော်တိရစ္ဆာန်အအသုံးပြုမှုကိုတအားနည်းချက်အဘယ်သူမျှမမော်ဒယ်လုံးဝ Sud ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဆင့်ဆင့် recapitulates သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျနော်တို့ကအပြည့်အဝနားလည်မှုအောင်မြင်ရန်မျိုးစုံအမူအကျင့်များနှင့် neurobiological မော်ဒယ်များမှသည်ရလဒ်များကိုပေါင်းစည်းရမည်ဖြစ်သည်။
ကြွက်အမူအကျင့်တာဝန်များကို Sud ရောဂါဗေဒ၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်ပေမယ့်လုံးဝရောဂါတုမရနိုငျသောပုံစံ၏အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်များ။ အကွိမျမြားစှာမော်ဒယ်များလူ့အခွအေနေမှတရားဝင်မှုနှင့်ဆီလျော်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားရာအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးကိုအောက်တွင်နှင့်အကျဉ်းချုံးထားပါသည် သဖန်းသီး။ 2.
အေးစက်သောအရပ် preference ကို (CPP က) မူးယစ်ဆေးဝါးအကြိုးရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်-ထိုးသွင်းမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အာရုံ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူနေရာတစ်နေရာပေါင်းသင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည်။ တိရစ္ဆာန်နောက်ပိုင်းတွင်လွတ်လပ်စွာမူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ်ရာအရပ်ကိုချဉ်းကပ်လျှင်, မူးယစ်ဆေး (ယူဆကြိုးဖြစ်ပါသည်Carr က et al ။ 1989; Bardo နှင့် Bevins 2000) ။ ကယူဆနေသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ, မူးယစ်ဆေးဝါးများ nonrewarding ထက်ဆည်းကပ်ခံရဖို့ကပိုများပါတယ်။ ဤစစ်ဆေးမှုကမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ဆုလာဘ်များအဆင့်နှင့်ဇွဲတိုင်းတာခြင်းအတွက်အသုံးဝင်သည်။ ဒါဟာရောဂါဗေဒမူးယစ်ဆေးရှာသို့မဟုတ်ဆည်းပူးနေတဲ့အသုံးဝင်သောမော်ဒယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာစမ်းသပ်မှုကိုလည်းအလွန်အမင်းအထိခိုက်မခံထိုးနေသည်: အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများပုံမှန်အားဖြင့်မြင့်မားသောဆေးများမှာဆေးများနှင့်ဆန္ဒရှိအလယ်အလတ်မှအနိမ့်မှာဆုချီးနေကြသည်။
ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်မှုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။ ဒါဟာဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုစားသုံးမှုတားယူဆနေသည်။ ဤအတာဝန်များကိုများတွင်တိရစ္ဆာန် (အနေနဲ့စမ်းသပ်-ထိုးသွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးကနေလူအများကထိုအာရုံနှင့်အတူနေရာတစ်နေရာသို့မဟုတ်တစ်ခုမဟုတ်ရင်အရေးပါတယ်လို့အရသာပေါင်းသင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားနေကြWelzl et al ။ 2001) ။ ထိုအရပ်ကိုသို့မဟုတ်အရသာ၏နောက်ဆက်တွဲရှောင်ရှားခြင်းဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်မှုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်း-ကန့်သတ်သက်ရောက်မှုတိုင်းတာပေမယ့်ရောဂါဗေဒမူးယစ်ဆေးရှာကြံသို့မဟုတ်ယူပြီးပုံစံပါဘူး။
ဆုတ်ခွာအလွဲသုံးစားမှုအချို့မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ချုပ်ရာပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်ဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုတစ်ခု constellation ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာများမူးယစ်ဆေးကိုလောင်, ကြာချိန်နှင့်ထိတွေ့မှု၏အတိုင်းအတာအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကနဦးမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများများ၏တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ရောင်ပြန်ဟပ်။ ဤအအပြုအမူတွေထဲကအတော်များများအလွယ်တကူတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် quantified နေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အီသနောဆုတ်ခွာထိုကဲ့သို့သော piloerection, locomotor activation, တုန်ခါနှင့်သိမ်းယူမှု (အဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ arousal နှင့်အမူအကျင့်ကို Activation လက္ခဏာအားဖြင့်မှတ်သားနေသည်Majchrowicz 1975) ။ opiates ကနေဆုတ်ခွာ (ptosis, အံသွားစကားများသော, lacrimation, စိုစွတ်သောခွေးကိုချောက်ချားခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်အမူအကျင့်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ activation နှစ်ဦးစလုံး elicits နှင့်ခုန်Rasmussen et al ။ 1990) ။ နီကိုတင်းကနေဆုတ်ခွာ (ထိုကဲ့သို့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုချောက်ချား, တုန်တုန်ယင်ယင်, writhing, ကြိုးစားမှုလွတ်မြောက်ရန်, ဝါး, gasping, ptosis, အံသွားစကားများသောနှင့်ဟနေခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်းဘုတ်များပါဝင်သည်O'Dell et al ။ 2007b) ။ ဤနိမိတ်လက္ခဏာ၏လူသားအားလုံးအတွက်ဆိုးကျိုးများ (DSM-IV 1994) မှအလားတူဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကင်းနဲ့စိတ်ကြွဆေးအဖြစ် psychostimulants အဘို့, ဤကဲ့သို့သောဇီဝကမ္မဆုတ်ခွာဆိုင်းဘုတ်များ (DSM-IV 1994) မရှိသလောက်လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ အလွဲသုံးစားမှု၏ psychostimulants ဆုံးနဲ့အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာ (intracranial Self-stimulation သုံးပြီးအကဲဖြတ်နိုင်သည့်မြင့်မားသောဆုလာဘ်တံခါးခုံဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာယေဘူယျ "အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်" elicitsO'Dell et al ။ 2007b) ။ ရုပ်သိမ်းရေးကိုလည်း (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ထိုကဲ့သို့သောလူမှုရေးအပြန်အလှန်စမ်းသပ်မှု, မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္, Light-မှောင်မိုက်တာဝန်နှင့်အခြားသူများအဖြစ်မျိုးစုံမော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. အကဲဖြတ်နိုင်သည့်တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောပြည်နယ် elicits ။
အများစုမှာနှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (သူတို့ရဲ့အားဖြည့်သက်ရောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုသော dopaminergic ဆားကစ်၏ activation မှတဆင့် locomotor အပြုအမူလှုံ့ဆော်ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု 1987; di Chiara 1995) ။ ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးပုံမှန်အားဖြင့်နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်မော်တာလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်။ အနိမ့်ဆေးများမှာလူနာလှုပ်ရှားမှုအရှိဆုံးမကြာခဏခရီးထွက် matrix ကိုဖြတ်သို့မဟုတ်အကွာအဝေးတစ်ခုတိုးအဖြစ်တိုင်းတာသောတိုးလာနေပါတယ်။ ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများမှာရွေ့လျားရေတံခွန်နှင့်ကျပုံစံအပြုအမူတစ်ခု, sniffing မြောကျမတို့အတွက်တိုး, ဦးခေါင်း bobbing သို့မဟုတ်အခြားထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေအဖြစ်ထင်ရှားနှင့်အကွာအဝေးတစ်နောက်ဆက်တွဲကျဆင်းခြင်းခရီးထွက်ရာ, ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ အီသနောလူသားများအတွက်, (သို့လျှော့ချပြုခဲ့ရာမှဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သော) အနိမ့်ဆေးများမှာသက်ဝင်နှင့်မြင့်မားသောဆေးများ (DSM-IV 1994) မှာ sedating ခံရဖို့ကြတယ်။ ကြွက်များတွင်အီသနောဖြစ်စေတိုးသတင်းပို့သို့မဟုတ်ရွေ့လျားလျော့ကျပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတသမတ်တည်း (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) လူ့ပုံစံ Parallel ပါဘူးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပင်နီကိုတင်းကြွက်များတွင်ရွေ့လျားတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့နည်းကျဆင်းနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ။ Opiates လည်း (locomotor activation ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်Buxbaum et al ။ 1973; Pert နှင့် Sivit 1977; Kalivas et al ။ 1983) ။ mu opioid agonists ကြွက်နှင့်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် locomotor ဆွစေနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲကုသမှု (ထိခိုက်လွယ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်Rethy et al ။ 1971; Babbini နှင့် Davis က 1972; Stinus et al ။ 1980; Kalivas နှင့် Stewart က 1991; Gaiardi et al ။ 1991) ။ အချုပ်အားစူးရှသောမော်တာတုံ့ပြန်မှုမူးယစ်ဆေး sensitivity ကိုတဦးညွှန်ပြချက်တွေဟာပေမယ့်အလွန်အမင်း variable ကိုဖြစ်ကြသည်။
ဒီဆေးတွေမဆိုရန်ထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့မှု (ကထပ်ခါတလဲလဲအနိမ့်ထိုးဖို့လူနာသို့မဟုတ်ကျပုံစံတုံ့ပြန်မှုလုပ်ခဲ့ပြီးသောာင်းလို့ချေါတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း, ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်Shuster et al ။ 1975a, b, 1977, 1982; Aizenstein et al ။ 1990; Segal နဲ့ Kuczenski 1992a, b) ။ (အသိမြှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့တုန့်ပြန် neuroplastic ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပြီး, အချို့သုတေသီများကမှီခို၏တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏အမူအကျင့် Correlate ကြောင်းတွေးဆခဲ့ကြRobinson နဲ့ Berridge 1993, 2000, 2001, 2008), အခြားသူများကိုဒီအခိုင်အမာငြင်းခုံပေမယ့် (di Chiara 1995) ။ ရှင်းနေသည်မှာ, သတိထားအလွယ်တကူတိုင်းတာသောရေရှည်တည်တံ့သော neuroplastic ပြောင်းလဲမှုကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုရန်၎င်း၏ဆက်စပ်မှုနေဆဲအခြေအတင်ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးစွဲဖြစ်လာနေတဲ့လူတွေကိုဆန္ဒအလျောက်မူးယစ်ဆေးလောင်ကတည်းကကတိရစ္ဆာန်အများကတိရိစ္ဆာန်မူးယစ်ဆေးဝါးများဆန္ဒအလျောက်အုပ်ချုပ်ထားတဲ့အတွက်မော်ဒယ် (သို့မဟုတ် "ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ") ဆန်းစစ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ (ကြွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထိုအပေါင်းများကိုချေဆတ်သောအခါသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်မည်မဟုတ်ကတည်းက) ဤသို့သောကိုကင်းနှင့်အနီကိုတင်းအဖြစ်မူးယစ်ဆေးအဘို့, ကြွက်များတွင် Self-အုပ်ချုပ်ရေး (SA) indwelling jugular ပြွန်မှတဆင့်သွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်မှုကနေတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးဆယ်ကျော်သက်သောလူသားမြားကိုကင်းနှင့်အနီကိုတင်းစီမံခန့်ခွဲဖို့သွေးကြောသွင်းလမ်းကြောင်းအသုံးမပြုနေချိန်မှာဝန်ခံရမည်, သူတို့အသှေးကို (ကိုကင်းများ၏ insufflation, အက်ကွဲကိုကင်းနှင့်အနီကိုတင်း၏ဆေးလိပ်သောက်) ထဲသို့မူးယစ်ဆေးလျင်မြန်စွာစုပ်ယူမှုအရာလမ်းကြောင်းများကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချလုပ်ပါ။ ပါးစပ်စားသုံးမိပါကအလွယ်တကူနေသမျှကာလပတ်လုံးအရသာ, ကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့်အရည်ချိန်ခွင်လျှာစနစ်တကျထိန်းချုပ်ထားကြသည်အဖြစ်, ကြွက်များတွင်ဖျော်ဖြေကြောင့်အီသနောတာရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံတွေ့ရမယ်။ ပါးစပ်နှင့်သွေးကြောသွင်းနှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်မိမိဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှု၏အသက်မှီခိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ပိုမိုလျင်မြန်စွာမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူဆည်းပူးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏပြုလုပ်လုပ်ဆောင်ကြောင်းတိရစ္ဆာန်များလူ့မူးယစ်ဆေးစွဲတူဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးဆည်းပူးနေပါကအလျင်အမြန်ဝယ်ယူပင်အခါ, မူးယစ်ဆေးမှီခိုညီမျှမဟုတ်ပါဘူး။ စမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များလည်းမဆိုအလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ယူမှု၏မရှိခြင်းအတွက်အစားအစာနှင့်အခြားပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများရရှိရန်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မှီခိုကဲ့သို့သောအပြုအမူပိုမိုရှုပ်ထွေးစမ်းသပ်ခြင်းလိုအပ်နှင့်ကျင်းပေါင်းပိုကောင်းမော်ဒယ်များပေးလက်ရှိအသုံးပြုအများအပြားပိုမိုခေတ်မီအော်ပရေတာအေးစက်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောဥပမာတစ်ခုချင်းစီအဆက်ဆက်သည်ပြုတ်ရည်အရင်တဦးတည်းထက်ပိုလီဗာပုံနှိပျလိုအပ်ပါတယ်ရသောတုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်အချိန်ဇယား (မူးယစ်ဆေးရှာလှုံ့ဆျောမှုအကဲဖြတ်ရန်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်Hodos 1961; ရောဘတ် et al ။ 1989; Depoortere et al ။ 1993) ။ မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့် reinstatement Paradigm relapse ပုံစံရန်အသုံးပြုကြသည် (က de ကျေးများနှင့် Stewart က 1981; Shaham et al ။ 2003) ။ တုံ့ပြန် compulsive အသုံးပြုမှုပုံစံကိုအသုံးပြုကြသည် timeout နှင့်အပြစ်ပေး (Vanderschuren နှင့် Everitt 2004; Deroche-Gamonet et al ။ 2004) ။ တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ်ရှည်လျား-access ကို (LgA) လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ဇယား (High-level ကိုသို့မဟုတ်မူးရူးအသုံးပြုမှုပုံစံကိုအသုံးပြုနေကြတယ်Knackstedt နှင့် Kalivas 2007; O'Dell et al ။ 2007a; ဂျော့ခ်ျ et al ။ 2008; Mantsch et al ။ 2008) ။ ကျယ်ပြန့် Self-အုပ်ချုပ်မှုပုံစံထဲမှာ, Deroche-Gamonet et al ။ (2004) ဤအတိုင်းတာအတော်ကြာပေါင်းစပ်နှင့် Self-စီမံခန့်ခွဲကြွက်၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းမှာပြထားတဲ့လူ့လူဦးရေအတွက်ရရှိသောရလဒ်များသည်ဆင်တူအများအပြားမှီခိုကဲ့သို့သောအပြုအမူ, ပြသကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိ သဖန်းသီး။ 1။ ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်များရုံမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများပေါ်လာဖို့စတင်နေကြသည်။
လူ့ Sud ဤကြွက်မော်ဒယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ဆက်စပ်မှုအခြေအတင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတှငျကြှနျုပျတို့ရှင်းလင်းစွာရောဂါဗေဒမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်မထားသောအရာမော်ဒယ်များမှလူ့ Sud နှင့်လျော့နည်းအလေးချိန်မော်ဒယ်အနီးဆုံးလာသည့်နည်းလမ်းများပိုမိုအလေးချိန် assign ။ ထို့ကြောင့်, Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိုမိုရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းများ (စသည်တို့ကိုတိုးတက်သောအချိုး, မျိုးသုဉ်း, reinstatement, ပြစ်ဒဏ်, LgA) ကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ Sud မှအများဆုံးသိကောင်းစရာများနှင့် ပတ်သက်. အားနည်းချက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ သို့သော်ဤအရှိဆုံးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအတွက် employ ရန်ခက်ခဲများနှင့်အကျိုးဆက်ဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်လေ့လာအနည်းဆုံးဖြစ်ကြ၏, ထိုနောက်ဆုံးပေါ်နည်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ Next ကိုကျနော်တို့ကြိုးဟာအားဖြည့်ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများ, ဆန္ဒရှိ, ဤမူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာ-related သက်ရောက်မှု (ရိုးရှင်းသော Self-အုပ်ချုပ်ရေး, အခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး, အေးစက်အရသာ / အရပ်ဌာနခြင်းကိုမနှစ်သက်နှင့်ဆုတ်ခွာအစီအမံအသီးသီး) ကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ညီမျှအလေးချိန် assign ။ ဤအဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးသည်မြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်တားမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုများအတွက် propensity ၏အသုံးဝင်သောသွယ်ဝိုက်အစီအမံနေသောဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့တရားဝင်မှုအတွက်လျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ locomotor သက်ရောက်မှုများကိုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်။ acute locomotor သက်ရောက်မှုမူးယစ်ဆေး sensitivity ကို၏အသုံးဝင်သောအညွှန်းကိန်းများမှာအရေးကြီးတဲ့အားဖြည့်များအတွက်အငှားအဖြစ်အသုံးများဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်စက်ခေါင်းများနှင့်အားဖြည့် (ထပ်ပေမယ့် nonidentical ဖြစ်စဉ်များပါဝင်ပတ်သက်နေdi Chiara 1995; Robinson နဲ့ Berridge 2008; Vezina နှင့် Leyton 2009).
လူ့ Sud မှဆီလျော်မှုအမျိုးမျိုးအပြင်, ထိုအမော်ဒယ်များသူတို့ပုံစံကြောင့် Sud ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အဆင့်ခြားနားသည်။ self-အုပ်ချုပ်ရေးမော်ဒယ်များနှစ်ဦးစလုံးရောဂါ၏အစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းအဆင့်။ CPP က, နေရာခြင်းကိုမနှစ်သက် (တကြ် CPA), အေးစက်အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက် (CTA), နှင့်စူးရှ locomotor သက်ရောက်မှုမော်ဒယ်အစောပိုင်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု, သတိထားမော်ဒယ်များစားသုံးမှုထပ်ခါတလဲလဲနှင့်ဆုတ်ခွာမော်ဒယ်ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကိုအေးစက်နှင့် abstinence ကြိုးစားခဲ့တယ်။ မြင် သဖန်းသီး။ 2.
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်များ၏သက်ရောက်မှုဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်လေ့လာခဲ့ကြရသောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်ရလဒ်များကိုအနှစ်ချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနှိုင်းယှဉ်အလွန်အရေးပါသည်: အများအပြားလေ့လာမှုများသာမြီးကောင်ပေါက်ဒါမှမဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ် preexposed ခဲ့ပြီးသောလူကြီးများအတွက်သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများတွေ့ရှိချက်များ၏အသက်အရွယ်တိကျတဲ့အဘို့စမ်းသပ်ကြပါဘူး။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအတွက်ဒီဆေးတွေရဲ့သက်ရောက်မှုနှိုင်းယှဉ်သိသိသာသာစာပေလည်းမရှိအဖြစ်ပြန်လည်သုံးသပ်, နီကိုတင်း, အီသနော, ဆေးခြောက်နှင့် psychostimulants အာရုံစိုက်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဆယ်ကျော်သက်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးဆနျးစစျအရာသာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများ (ဥပမာတွေ့ရှိပါသည် Zhang က et al ။ 2008) ။ ပြန်လည်သုံးသပ်၏အောစွဲမှတဆင့်ကနဦးအသုံးပြုမှုအနေဖြင့်လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဆန္ဒရှိရာအတွက်အကျိုးတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်အနည်းငယ်မူးယစ်အုပ်ချုပ်ရေး၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်နေဖြင့်စတင်မည်နှင့် locomotor သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ပါးစပ်နှင့်သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေတဆင့်ရေရှည်မိမိဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှုအားဆွေးနွေးရန်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားမှု၏အရာမော်ဒယ်ဖွယ်ရှိအကျိုးဆက်များဆုတ်ခွာလေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထားဆှေးနှေးပါမညျ။
ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်သက်သေအထောက်အထားများကိုမည်သည့်အတွက်ဤကောက်ချက်, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများချိန်ခွင်လျှာအပေါ်ပိုပြီးကြိုးများနှင့်လျော့နည်းခြင်းကိုမနှစ်သက်ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုယ်နှိုက်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဇာတ်စင်အစောပိုင်းမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေတိုးမြှင့်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါဝေဖန်လေ့လာမှုများပြုမိကြပြီမဟုတ်: သို့သော်လည်းဤလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်စတင်သောအခါအ compulsive အသုံးပြုမှုမှတိုးတက်မှုကပိုဖွယ်ရှိကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်မည်သည့်ထောက်ခံမှုမပေးပါဘူး။
ကျနော်တို့ကြောင့်ဤမော်ဒယ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နှိုင်းယှဉ်၏ဆွေမျိုးရိုးရှင်းသုံးပြီးထုတ်ဝေကျယ်ပြန့်အချက်အလက်များ၏စွဲ-related အပြုအမူကြွက်မော်ဒယ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ မျောက်မော်ဒယ်များအလွန်သိကောင်းစရာများပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, ကျနော်တို့ (တိုက်ရိုက်ဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူမျောက်ဝံများအတွက်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှုကိုတွေ့Schwandt et al ။ 2007) ။ တခြားနေရာကျယ်ကျယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖြစ်ကြောင်းအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီး (လှံကို 2000), ကျနော်တို့ 28-42 ကာလ၏အသက်အပိုင်းအခြားကြွက်များတွင် "မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်" ဖြစ်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ , ဟော်မုန်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးရငျ့စံခြင်းအားဖြင့်, ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ၏ဤအဆင့်တွင် (လူသားများတွင်အသက်အရွယ် 12-18 နှစ်ကိုက်ညီလှံကို 2000) ။ ဒါဟာတိရိစ္ဆာန်များဤအချိန်ကာလအတွင်းမှတဆင့်ယူနီဖောင်းမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဖော်ပြအရေးကြီးသည်။ တကယ်တော့အောက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြအချို့အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များ 28- နှင့် 42 နှစ်အရွယ်ကြွက်အကြားသိသိသာသာကွာခြား, စွဲအားနည်းချက်အဖြစ်အများကြီးသိသိသာသာ 12- နှင့် 18 နှစ်အရွယ်လူသားမြားသညျအကြားကွဲပြားနေသည်။
ကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားသူတို့လူကြီးမှတိုးအဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလူသားများနှင့်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာအများအပြားအလားတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်အပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ကြုံခံစားကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, forebrain dopamine innervation နေဆဲ (နှစ်ဦးစလုံးသညျလူသားတို့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်Seeman et al ။ 1987) နှင့်ကြွက်။ Dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့် (ကအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုကျော်ကျဆင်းGelbard et al ။ 1989; Teicher et al ။ 1995; Andersen ကနှင့် Teicher 2000) ။ ကြွက်များတွင် microscopy လေ့လာမှုများအားဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ်ဤအဆင့်တွင်နေစဉ်အတွင်းရင့်ကျက်သည့် amygdala နှင့် prefrontal cortex အကြားထို့အပြင်ခုနှစ်, ဆက်သွယ်မှု, (Cunningham et al ။ 2002, 2008) နှင့်လူသားတွေအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (Ernst et al ။ 2005; Eshel et al ။ 2007) ။ ထို့ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုလူသားများနှင့်ကြွက်အကြားနည်းလမ်းများစွာအတွက်ဖွယ်ရှိဆင်တူသည်။
မှာပြထားတဲ့အတိုင်း သဖန်းသီး။ 2မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆီသို့လိုအပ်သောပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုသည်။ ပထမဦးဆုံးမူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံကို၏အရည်အသွေးအနာဂတ်စားသုံးမှုအဆုံးအဖြတ်အတွက်အရေးကြီးဖြစ်ပါသည်: အရှိဆုံးမူးယစ်ဆေးအဘို့, ၎င်းတို့၏ကနဦးအတှေ့အကွုံကိုခံစားသောလူမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုပြန်လုပ်ဖို့ပိုများပါတယ် (Haertzen et al ။ 1983) ။ အလွဲသုံးစားမှုကွိုးစားအားထုကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုများ၏မူးယစ်ဆေးဝါး (ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု et al ။ 1976), နှင့်အစောပိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစဉ်အတွင်းထိုအတှေ့အကွုံမြားအကြားအလုံးစုံချိန်ခွင်လျှာတစ်ဦးချင်းအနာဂတျမှာမူးယစ်ဆေးယူပြီးပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကြွက်များတွင်, ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ, တကြ် CPA နှင့် CTA ကနဦးဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်အကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုကြသည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများအသက်မှီခိုသို့တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။
တချို့ကအငယ်သည်အသုံးပြုသူများ (မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပိုမိုအကြိုးရှာတွေ့သောကြောင့်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်မြင့်မားသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဖြစ်ပေါ်ကြောင်းခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်ပါပြီVastola et al ။ 2002; Belluzzi et al ။ 2004; Badanich et al ။ 2006; O'Dell 2009) ။ အသက်အရွယ်နုပျိုသောလူများနှင့်ကြွက်သဘာဝအတ္ထုများထဲကနေ သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်ရရှိအချို့သက်သေအထောက်အထားများ (ရှိပါသည်Vaidya et al ။ 2004), အရာစွဲလမ်းတ္ထုများမှယဘေုယနိုင်ဘူး။ ဒီတော့လျှင်, အငယ်အသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ပိုပြီးမကြာခဏမူးယစ်ဆေးဝါးယူသို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်တွင်တွေ့မြင်မှီခိုဖို့ပိုမြန်တိုးတက်မှုရှင်းပြနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်ဆေးများမှာလိမ့်မယ်။ ဒီအရေးပါသညျ့မေးခှနျးဖြေရှင်းရန်သက်သေအထောက်အထားရောထွေးသော်လည်းမြီးကောင်ပေါက်ကအနည်းဆုံးတချို့မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
နီကိုတင်း (ဆယ်ကျော်သက်အတွက်တသမတ်တည်းပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ပါသည်Vastola et al ။ 2002; Belluzzi et al ။ 2004; Torrella et al ။ 2004; Shram et al ။ 2006; Kota et al ။ 2007; Brielmaier et al ။ 2007; တောရက်စ် et al ။ 2008) ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအကြောင်းပြသထားပါတယ် အီသနော (ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းဖြစ်ပါသည်Philpot et al ။ 2003) ။ psychostimulant ဆုလာဘ်၏လေ့လာရေး (ကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေး, စိတ်ကြွဆေး) (ကပိုရောထွေးနေကြသည်ပေမယ့်အထူးသဖြင့်နိမ့်ဆေးများမှာမြီးကောင်ပေါက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုညွှန်ပြလေ့Badanich et al ။ 2006; Brenhouse နှင့် Andersen က 2008; Brenhouse et al ။ 2008; Zakharova et al ။ 2008a, b; ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု Aberg et al ။ 2007; Adriani နှင့် Laviola 2003; Balda et al ။ 2006; ကမ့်ဘဲလ် et al ။ 2000; Schramm-Sapyta et al ။ 2004; တောရက်စ် et al ။ 2008) ။ Tetrahydrocannabinol (THC) ကြွက်များတွင်ခိုင်ခံ့သောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးထုတ်ယူမပေးပါဘူး။ မြင် စားပွဲတင် 1။ ယေဘုယျအားအေးစက်သောအရပ် preference ကိုလေ့လာမှုများမြီးကောင်ပေါက်အထူးသဖြင့်ခုံဆေးများမှာပိုအကြိုးအလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေးကိုရှာဖွေနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပိုများသောစနစ်တကျထိုး-effect ကိုနှိုင်းယှဉ်စာပေအတွက်လိုအပ်နေပါသည်။
ဆုလာဘ်, မနှစ်သက်မှု, Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆုတ်ခွာ၏အသက်အရွယ်မှီခို
ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးသောနှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဆန္ဒရှိဆိုးကျိုးများလျော့နည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သောစာပေထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောတူညီမှုရှိပါသည်။ ဤသည်တို့အတွက်မှန် နီကိုတင်း (Wilmouth နှင့်လှံ 2004; Shram et al ။ 2006), အီသနော (Philpot et al ။ 2003; နှင့် Schramm-Sapyta et al ။ , အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာတွေ့ရှိချက်), THC (Schramm-Sapyta et al ။ 2007; Quinn et al ။ 2008), စိတ်ကြွဆေး (Infurna နှင့်လှံ 1979), နှင့် ကိုကင်း (Schramm-Sapyta et al ။ 2006); မြင် စားပွဲတင် 1။ တကယ်တော့တစ်ဦး nonaddictive ပစ္စည်းဥစ္စာဘို့အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်အေးစက်, လီသီယမ်ကလိုရိုက်လည်း (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်Schramm-Sapyta et al ။ 2006), ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုကိုအာရုံမခံစားနိုင်သောအကြံပြုခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ် generalized အင်္ဂါရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုဤတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်မှုအပြင်, အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေး၏အခြားအလားအလာကိုအသုံးပြုဖို့-ကန့်သတ်သက်ရောက်မှုလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်လျှော့ချနေကြသည်။ ဥပမာ, နီကိုတင်း ဆယ်ကျော်သက်အထီးကြွက်များတွင် anxiolytic ပေမယ် anxiogenic (အရွယ်ရောက်သူ၌တည်ရှိ၏Elliott သည် et al ။ 2004) ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များလျော့နည်းထိခိုက်မခံများမှာ အီသနောင့် လူမှုရေး inhibitory သက်ရောက်မှု (Varlinskaya နှင့်လှံ 2004b), ရက်နာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်ပူပန် (Doremus et al ။ 2003; Varlinskaya နှင့်လှံ 2004a), နှင့်သက်သာစေသောဆေးသက်ရောက်မှု (Little က et al ။ 1996; Swartzwelder et al ။ 1998) ။ ၏ anxiogenic နှင့်သက်သာစေသောဆေးဆိုးကျိုးများ THC ထို့အပြင် (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လျှော့ချနေကြသည်Schramm-Sapyta et al ။ 2007) ။ ယေဘုယျအားဖြစ်စေဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံကနေသင်ယူဖို့နိုင်စွမ်း၏ပြင်းထန်မှုတကမ္ဘာလုံးလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပိုမိုမြင့်မားသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါအရာ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ locomotor သက်ရောက်မှုမူးယစ်ဆေး sensitivity ကိုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင် neuroplasticity အပေါ်အသက်အရွယ်-related သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုတစ်ဦးကကြီးမားသောအရေအတွက်ကကျွန်တော်ယခုအနှစ်ချုပ်တံ့သောဤအဖြစ်ရပ်, ဆန်းစစ်ပါပွီ။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသော locomotor သက်ရောက်မှုမြင့်မား variable ကိုနှင့်အသက်, မူးယစ်ဆေးများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်။ နီကိုတင်း တိုးသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းရွေ့လျားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ စာပေအတွက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံ (နီကိုတင်းရဲ့ locomotor သက်ရောက်မှု၏ညှနျကွားဆုံးဖြတ်သည်အရာကိုကဲ့သို့ရှိ၏ဂျရုမ်းနှင့် Sanberg 1987), ဒါကြောင့်အသက်အရွယ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းအခြေအတင်ဆွေးနွေးကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ (ဆယ်ကျော်သက်အတွက်တိုးမြှင့်ရွေ့လျားလေ့လာတွေ့ရှိပေမယ့်အရွယ်ရောက်သူများတွင်ရွေ့လျားလျော့နည်းသွားVastola et al ။ 2002; Cao et al ။ 2007a) ။ လေ့လာတွေ့ရှိနောက်ထပ်လေ့လာမှု (45 ရက်ပေါင်းဟောင်း) လူကြီးများနှင့် midadolescents အတွက်ရွေ့လျားလျော့နည်းသွားပေမယ့်နုပျိုမြီးကောင်ပေါက်မသက်ရောက် (28 ရက်ပေါင်းဟောင်း; Belluzzi et al ။ 2004) ။ လေ့လာတွေ့ရှိနှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ (ဆယ်ကျော်သက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးအသက်အရွယ်အတွင်းရှိရွေ့လျားလျော့နည်းသွားလိုပက်ဇ် et al ။ 2003; Rezvani နှင့် Levin 2004) ။ လေးကတခြားလေ့လာမှုတွေ (တန်းတူအတိုင်းအတာအထိနှစ်ဦးစလုံးအသက်အရွယ်အတွက်ပိုမိုရွေ့လျားလေ့လာတွေ့ရှိပါပြီFaraday et al ။ 2003; Schochet et al ။ 2004; Collins et al ။ 2004; Cruz et al ။ 2005) ။ လေ့လာမှုတစ်ခု (ဆယ်ကျော်သက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်သောလူတန်းစားရွေ့လျားအစီရင်ခံတင်ပြCollins နှင့် Izenwasser 2004) ။ ဤရွေ့ကားကွဲလွဲရလဒ်များလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးနီကိုတင်းပမာဏ၏တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူအကွာအဝေးရှိနေသော်လည်းရယူခဲ့ကြသည်။ အဘို့အအစီရင်ခံစာများ အီသနော လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးဆန်းစစ်အလားတူဆေးများကြားမှအလားတူအပြီးအပြတ်ကောက်ဖြစ်ကြသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခု (အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်တွေမှာ သာ. ကြီးမြတ်မော်တာလျှော့ချရေးအစီရင်ခံတင်ပြလိုပက်ဇ် et al ။ 2003), အခြားလေ့လာမှုနှစ်ခုအသက်အရွယ် (အတွင်းတန်းတူ locomotor လျှော့ချရေးအစီရင်ခံတင်ပြနေစဉ်Rezvani နှင့် Levin 2004) ။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုမြီးကောင်ပေါက် (အပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအကျိုးသက်ရောက်နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးအသက်အရွယ်အတွက် locomotor activation, အစီရင်ခံတင်ပြStevenson မှ et al ။ 2008) ။ စွမ်းရည်နှင့်မော်တာဆွခုန်၏ချို့ယွင်း (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးအသက်နှင့်အတူတိုးပွားလာနေချိန်တွင်မျောက်ဝံများခုနှစ်, အီသနောရဲ့ ataxic သက်ရောက်မှု, အသက်နှင့်အတူလျော့Schwandt et al ။ 2007). ဖက်တမင်းဆေးပြား နှင့် ကိုကင်း နှစ်ဦးစလုံးရွေ့လျားတိုးမြှင့်။ မြီးကောင်ပေါက်မှ (နှစ်ဦးစလုံးလူနာနှင့်ကျပုံစံလှုပ်ရှားမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌) တသမတ်တည်း hyporesponsive များမှာ စိတ်ကြွဆေး နှင့် စိတ်ကြွဆေး အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (နှိုင်းယှဉ်Lanier နှင့် Isaacson 1977; Bolanos et al ။ 1998; Laviola et al ။ 1999; Zombeck et al ။ 2009) ။ သို့သော်တုန့်ပြန် ကိုကင်းအသက်ရှင်ရာပဉ္စမသို့မဟုတ်ဆဋ္ဌသီတင်းပတ်အတွင်းကြွက်များအသက် (အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှ preadolescence) ၏တတိယသို့မဟုတ်စတုတ္ထပတ်တွင်ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများ (နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှ midadolescence) ယေဘုယျအားဖြင့် (အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အတွက် သာ. ကြီးလူနာတင်ကားများနှင့် stereotypy သတင်းပို့လှံတော်နှင့်အုတ် 1979; Snyder et al ။ 1998; Caster et al ။ 2005; Parylak et al ။ 2008) ။ အများစုမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးထို့နောက် (လူကြီးနှောင်းပိုင်းမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထဲကနေမျှပြောင်းလဲမှုကိုစောင့်ရှောက်မည်Laviola et al ။ 1995; Maldonado နှင့် Kirstein 2005; Caster et al ။ 2005; Parylak et al ။ 2008), အခြားသူများကိုလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်လျှော့ချလူနာတင်ယာဉ်နှင့် stereotypy ဆီသို့အနည်းငယ်လမ်းကြောင်းသစ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြစဉ် (Laviola et al ။ 1995; Frantz et al ။ 2007), အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးအတွက် (Laviola et al ။ 1995). မော်ဖင်းအကိုက် (အရွယ်ရောက်သူထက်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ် locomotor activation လှုံ့ဆော်လှံကို et al ။ 1982) ။ ယေဘုယျအားအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးစူးရှ locomotor သက်ရောက်မှုမှအသက်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. စာပေထဲမှာမပါသဘောတူညီမှုလည်းမရှိ။
အတော်များများကအစီရင်ခံစာများ psychostimulants မှ locomotor ာင်းအပေါ်အသက်အရွယ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အသိမြှရှင်းလင်းစွာကြီးထွားပြောင်းလဲစေပါသည်။ တိရိစ္ဆာန်များရင့်ကျက်အဖြစ်ဒါဟာ (အစောပိုင်းမွေးကင်းစကလေးများကာလအတွင်းပျက်ကွက်သည်နှင့်ပေါ်ထွက်လာKolta et al ။ 1990; McDougall et al ။ 1994; Ujike et al ။ 1995) ။ (ကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေး, စိတ်ကြွဆေးနှင့် phencyclidine အဘို့, အကဲဆတ်ခြင်းရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. အဆင့်ဆင့်နှောင်းပိုင်းတွင်မွေးကင်းစကလေးများဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသိသာဖြစ်လာ, တတိယနှင့်စတုတ္ထ postnatal ရက်သတ္တပတ်များအကြားTirelli et al ။ 2003) ။ ာင်းရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ပြောင်းလဲရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးငြင်းခုံလည်းမရှိ။
ဘို့ နီကိုတင်းအချို့စမ်းသပ် (ဆယ်ကျော်သက်အတွက်လျှော့ာင်းလေ့လာတွေ့ရှိပါပြီSchochet et al ။ 2004; Collins et al ။ 2004; Collins နှင့် Izenwasser 2004; Cruz et al ။ 2005); အချို့သော (ဆယ်ကျော်သက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်ာင်းလေ့လာတွေ့ရှိပါပြီBelluzzi et al ။ 2004; Adriani et al ။ 2006); နှင့်အခြားသူများ (မျှအသက်အရွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှုလေ့လာခဲ့ကြFaraday et al ။ 2003), အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးအတွက် (Collins et al ။ 2004; Collins နှင့် Izenwasser 2004) ။ ထို့ကြောင့်စာပေနီကိုတင်းတကမ္ဘာလုံးကိုပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့မြီးကောင်ပေါက်များတွင်လူကြီးများထက်မပေးကြောင်းဖော်ပြသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအဖို့တုန့်ပြန်ာင်းဆန်းစစ်ထားပါတယ် အီသနော နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက် (ဒီထက်အထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရStevenson မှ et al ။ 2008).
ဘို့ စိတ်ကြွဆေးနှစ်ခုအစီရင်ခံစာများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက် (ထက်ပိုမို sensitize နိဂုံးချုပ်ပါပြီAdriani et al ။ 1998; Laviola et al ။ 2001) ။ အဘို့ ကိုကင်းသုံးလေ့လာမှုများ (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်လျှော့ချာင်းအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီLaviola et al ။ 1995; Collins နှင့် Izenwasser 2002; Frantz et al ။ 2007) ။ တခြားလေ့လာမှု (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များပိုမိုာင်းအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီCaster et al ။ 2005, 2007) နှင့်ကြွက် (Schramm-Sapyta et al ။ 2004) ။ မြီးကောင်ပေါက်အတွက် သာ. ကွီးမွတျကိုကင်းာင်းအစီရင်ခံသောလေ့လာမှုများနှစျယောကျ (Caster et al ။ 2005, 2007)) တစ်ခုတည်းမြင့်သောဆေးထိုးပြီးနောက်ထပ်ခါတလဲလဲ-ထိုးမူးရူးနှင့် 24 ဇအတွင်း (ထိခိုက်လွယ်၏လျင်မြန်သောအကဲဖြတ်အသုံးပြုသွားမည်။ ထို့ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်ပိုမြန်ာင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပေလိမ့်မည်။
ဒီဆေးတွေမှအမူအကျင့် plasticity နှစ်ဦးစလုံးဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ရှင်းလင်းစွာဖြစ်နိုင်ပေမယ့်နှစ်ဦးကိုအသက်အရွယ်မရွေးအတွက်ဆွေမျိုးပြင်းအားမူးယစ်ဆေး, ဆေးထိုးခြင်း, ထိတွေ့မှု၏ကြာချိန်ပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားသက်သေအထောက်အထားများ၏အလေးချိန်မြီးကောင်ပေါက်ဒီဆေးတွေမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအထပ်ထပ်ထိတွေ့မှုမှတုံ့ပြန်မှုအတွက် locomotor အပြုအမူ circuitry အတွက် neuroplastic အပြောင်းအလဲများမှလူကြီးများထက် ပို. အားနည်းချက်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြသထားတယ်။
psychostimulants, နီကိုတင်းနှင့်အီသနောလူ့မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေနှင့်မှီခိုဖို့တိုးတက်မှုတစ်ခုဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မော်ဒယ်ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်၏လုပ် SA (THC ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကြွက်အားဖြင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး) ။ ယနေ့အထိထုတ်ဝေသုတေသနအများကြီးလေ့လာမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ညွှန်ပြဖြစ်သော SA ၏ကနဦးဝယ်ယူမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားသည်။ အနည်းငယ်လေ့လာမှုများရေရှည်လုပ် SA နှင့်မှီခိုဖို့တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အများဆုံးသိကောင်းစရာများနေသောထိုကဲ့သို့သောတိုးတက်သောအချိုး, LgA, မျိုးသုဉ်းနှင့် reinstatement အဖြစ် permutation, ဆန်းစစ်ပါပွီ။
၏ကြိမ်နှုန်း နီကိုတင်း ရလဒ်တွေကိုကွဲပြားသော်လည်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်ပါလိမ့်မယ်။ Levin et al ။ (2003, 2007) ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များထက်စဉ်ဆက်မပြတ်အားဖြည့်အချိန်ဇယား (လီဗာစာနယ်ဇင်းနှုန်းတဦးတည်းပြုတ်ရည်) အရပိုပြီးနီကိုတင်း (တစ်နာရီလျှင်ပိုပြီးတာဟာ) ယူကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွင်းကနဦးသင်တန်း၏အသက်အပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုသည်။ session တစ်ခုနှုန်းတာဟာ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အသက်အပိုင်းအခြားအတွင်းစောစောလူကြီးသို့စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်တိုးပွားလာနှင့်အတူလျော့နည်းစေပါသည်။ တိရစ္ဆာန်ရင့်ကျက်အဖြစ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးစုံရက်သတ္တပတ်နှင့်အတူ, လိင်ကွဲပြားမှုပေါ်ပေါက်လာကြသည်။ အထီးဆယ်ကျော်သက်-စတင်ခြင်းကြွက် (အစပိုင်းတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းကိုပြသပေမယ့်သူတို့ကအသက်အရွယ်အဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-စတင်ခြင်းအဆင့်ဆင့်သူတို့ရဲ့စားသုံးမှုလျော့Levin et al ။ 2007) ။ ဆနျ့ကငျြ, ဆယ်ကျော်သက်-စတင်ခြင်းအမျိုးသမီးကြွက်သူတို့လူကြီးများ (ဖြစ်လာအဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားသည့်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်မြင့်ပြသLevin et al ။ 2003) ။ နောက်ထပ်အုပ်စုတစုလည်း (ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးကြွက်များထက်ပိုလျှင်မြန်စွာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးထက်နီကိုဒင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆည်းပူးကြောင်းပြသထားပါတယ်ချန် et al ။ 2007) ။ ဆနျ့ကငျြ, Shram et al ။ (ကမြင့်မားသောတုံ့ပြန်မှုအချိုး (ပြုတ်ရည်နှုန်းငါးလီဗာပုံနှိပျ) မှာဆယ်ကျော်သက်အထီးကြွက်လူကြီးများထက်လျော့နည်းနီကိုတင်း Self-စီမံခန့်ခွဲကြောင်းပြသကြShram et al ။ 2007b) ။ ဒီလေ့လာမှုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်ကိုလည်းတိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်မူးယစ်ဆေးရှာလျော့နည်းလှုံ့ဆျောမှုပြခြင်းနှင့်ဆားနီကိုတင်းအစားထိုးအခါမျိုးသုဉ်းရန်လျော့နည်းခံနိုင်ရည်ရှိကြ၏။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများမြီးကောင်ပေါက်ကနဦးစားသုံးမှု၏မြင့်မားအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုပေမယ့်နီကိုတင်းမှီခိုကဲ့သို့သောအပြုအမူပြမှလျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။ မြင် စားပွဲတင် 1.
ဘို့ အီသနော, ဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်သောက်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များထက်ပိုအီသနောလောင်အချို့သက်သေအထောက်အထားများ (ရှိပါသည်Doremus et al ။ 2005; Brunell နှင့်လှံ 2005; Vetter et al ။ 2007), ဒါပေမဲ့ဒီအားလုံးလေ့လာမှုများအတွက်ထင်ရှားမဟုတ်ပါဘူး (Siegmund et al ။ 2005; ခေါင်းလောင်း et al ။ 2006; Truxell et al ။ 2007) သို့မဟုတ်ကြွက်များတွင် (ပတ်သာ et al ။ 2008) ။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ relapse အပေါ်အသက်အရွယ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်နှင့်ရေရှည်သောက်သုံး (အပြီးလူကြီးအတွက်လေ့လာတဲ့အခါမှာဆယ်ကျော်သက်-စတင်ခြင်းသောက်သောက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရSiegmund et al ။ 2005; Fullgrabe et al ။ 2007), အသုံးပြုတဲ့ဖိအားအပေါ် မူတည်. (Siegmund et al ။ 2005) ။ နီကိုတင်းနှင့်မတူဘဲအီသနောမသက်ဆိုင်စားသုံးမှု၏အဆင့်၏, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များပိုမိုမှီခိုကဲ့သို့သောအပြုအမူသွေးဆောင်လိမ့်မည်။ မြင် စားပွဲတင် 1.
အများစုမှာလေ့လာမှုအဆင့်ဆင့်အတွက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားမျှကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာတွေ့ရှိပါပြီ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (Leslie et al ။ 2004; Belluzzi et al ။ 2005; Kantak et al ။ 2007; Kerstetter နှင့် Kantak 2007; Frantz et al ။ 2007) ။ သို့သော်တဦးတည်းလေ့လာမှုအသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုမျိုးရိုးဗီဇအပေါ်မူတည်မည်အကြောင်းဘော်ပြ။ ပယ်ရီ et al ။ (2007) အနိမ့် saccharin စားသုံးမှုများအတွက်မွေးမြူဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များပိုမိုမြန်ဆန်အနိမ့် saccharin စားသုံးမှုများအတွက်မွေးမြူလူကြီးများထက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူကြောင်းလေ့လာသည်။ ဆနျ့ကငျြ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများနှင့်ညီမျှနှုန်းထားများမှာမြင့်မားတဲ့ saccharin စားသုံးမှုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းဘို့ရပ်ကြီး။ ဤအချက်မှာအထောက်အထားကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမြီးကောင်ပေါက်နေဖြင့်အဆင့်မြင့်မှာလူကြီးများထက်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ဗီဇကွဲပြားမှုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသက်အရွယ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင်းကိုအကြံပြုထားသည်။ မြင် စားပွဲတင် 1။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေပဏာမလေ့လာမှုများတိုးတက်သောအချိုး, မျိုးသုဉ်းနှင့်ကိုကင်းရှာ၏ reinstatement ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အကြားကွာခြားမအကြံပေးချင်ပါတယ်။
ကိုကင်း, နီကိုတင်းနှင့်အီသနော၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဤအကြောင်းကွဲလွဲအစီရင်ခံစာများဒီဆေးတွေ၏ဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှု၏အဆင့်ကိုတသမတ်တည်းအသက်အရွယ်မှီခိုမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဆန်းစစ်မူးယစ်ဆေးပေါ် မူတည်. မြီးကောင်ပေါက်မှီခိုကဲ့သို့သောအပြုအမူမှ (အီသနော) ကိုပိုမိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း (နီကိုတင်း, ကိုကင်း) ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်။ မှီခိုကဲ့သို့ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူများ၏အသေးစိတ်လေ့လာမှုများမြီးကောင်ပေါက်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ compulsive ပုံစံများဖို့ပိုမိုမြန်ဆန်တိုးရှိမရှိဥာဏ်သော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။ အနာဂတ်အလုပ်တိုးတက်သောအချိုး, LgA, မျိုးသုဉ်းရန်ခုခံနှင့်အပြစ်ပေးသို့မဟုတ် compulsive မူးယစ်ဆေးရှာအပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအလေးပေးနေရာသငျ့သညျ။ ထိုသို့သောနည်းစနစ်မြီးကောင်ပေါက်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေဘို့မိမိတို့ propensity ထံမှကွဲပြား, စွဲတူသောအပြုအမူကိုပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ရှိမရှိထုတ်ဖေါ်ဖို့အလားအလာရှိသည်။
ဆုတ်ခွာအများအပြားနှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ချုပ်ရာပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်သောအမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုတစ်ခု constellation ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပြုလုပ်ဇီဝကမ္မ (စသည်တို့ကိုဝမ်းလျှော, သိမ်းယူမှု,) ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်တစ်ဦး "အမာခံ" ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှု (ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါအရာမူးယစ်တိကျတဲ့တုံ့ပြန်မှုနှင့်အပြုအမူနှစ်မျိုးလုံးပါဝင်နိုင်ပါသည်ရသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု (စသည်တို့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှု, dysphoria, တဏှာ,)Koob 2009) ။ နောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ဆည်းပူးနေနှင့်ကျင်းပေါင်းဖို့တိုးတက်မှုအပေါ်ဆုတ်ခွာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ကြာချိန်နှင့်အသုံးပြုသူ၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်။ မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေတဲ့တစ်ခုတည်းသောဇာတ်လမ်းတွဲပြီးနောက်ရုပ်သိမ်းရေးကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်အနာဂတ်အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကမကောင်းတဲ့ရက်နာ (အချို့လူတွေကိုယာယီအရက်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်Prat et al ။ 2008), ဒါပေမယ့်တသမတ်တည်းပိုပြီးပြင်းထန် Hangover ရှိသည်နှင့်ရက်နာရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာဖို့မသောက်ရသူတွေကိုအရက်မှီခိုဖို့တိုးဖို့ပိုများပါတယ် (Earleywine 1993a, b) ။ ပြီးနောက်အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုထပ်ခါတလဲလဲ, ထိုကဲ့သို့သောအနုတ်လက္ခဏာအဖြစ်လက္ခဏာတွေထိခိုက်စေ, မြင့်မားသောဆုလာဘ်တံခါးခုံနှင့်တဏှာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး (ယူပြီးမူးယစ်ဆေးဆက်လက်Koob 1996; Koob နှင့် Le Moal 1997) ။ အများအပြားကလေ့လာမှုများကိုအောက်တွင်အကျဉ်းချုံးအဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်, လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နီကိုတင်းနှင့်အီသနောအဘို့အလျှော့ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေတွေ့ကြုံခံစားကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေးနှင့် THC ဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ကနေဆုတ်ခွာ
အတော်များများကလက္ခဏာတွေ နီကိုတင်း ဆုတ်ခွာထိုကဲ့သို့သောဆုတ်ခွာ-ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်အဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်, (အတွင်းလျှော့ချနေကြသည်O'Dell et al ။ 2007b), စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူ (Wilmouth နှင့်လှံ 2006; ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု Kota et al ။ 2007), နှင့်ဆုလာဘ်အတွက်လျှော့ (O'Dell et al ။ 2006) ။ မြီးကောင်ပေါက်လည်း (နီကိုတင်းဆုတ်ခွာ၏နည်းပါးလာ somatic ရောဂါလက္ခဏာတွေပြသO'Dell et al ။ 2006; Kota et al ။ 2007) ။ မြင် စားပွဲတင် 1။ အများဆုံး အီသနော ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်လျှော့ချနေကြသည်။ ဤရွေ့ကား (ရုပ်သိမ်းရေး-သွေးဆောင်လူမှုရေးတားစီးပါဝင်သည်Varlinskaya နှင့်လှံ 2004a, b), စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူ (Doremus et al ။ 2003), နှင့်သိမ်းယူမှု (Acheson et al ။ 1999) ။ ဆုတ်ခွာ၏ဆနျ့ကငျြအနည်းဆုံးနှစ်ခုတင်း cortical electroencephalogram လှုပ်ရှားမှု (Slawecki et al ။ 2006), နှင့် hypothermia (Ristuccia နှင့်လှံ 2005အီသနောငွေ့ရှူရှိုက်မိပါကပေးပို့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်) မြီးကောင်ပေါက်မှာပိုသိသာဖြစ်ကြသည်။ မြင် စားပွဲတင် 1.
ဒါဟာသက်ရောက်မှုလူ့မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေမှယဘေုယမယ်လို့မည်သို့မည်ပုံသည်ဤဒေတာကနေအခြရန်ခက်ခဲသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့ပြီးနောက်ဆုတ်ခွာဆိုင်းဘုတ်များ၏ဆွေမျိုးမရှိခြင်း compulsive အသုံးပြုမှုဖို့တိုးတက်မှုနှေးကွေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရတော့မှာပါ။ ဆနျ့ကငျြ, ကနဦးလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အပြီးဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ၏မရှိခြင်းကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်မပေးကြောင်းအမြင်မှတိုးချဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုလှုံ့ဆျောပေးပေလိမ့်မည်။
သေးအပြည့်အဝစူးစမ်းကြပြီမဟုတ်သည့်၎င်းတို့၏အလွဲသုံးစားမှုအလားအလာတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့သောဆကျဆံရေးရှိနိုင်တယ်လို့မူးယစ်ဆေးအများအပြားသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, စွဲမူးယစ်ဆေးကုသမှုမှာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်သိမြင်မှုချို့ယွင်းရှိသည်ဖို့လူသိများကြသည် (Volkow နှင့်မုဆိုး 2000; Kalivas နှင့် Volkow 2005; Moghaddam နှင့် Homayoun 2008) ။ ဒါဟာသိမြင်မှုချို့ယွင်းအရင်အဦးနေရာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေရာမှဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိလက်ရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လက်တွေ့ဒေတာ (အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှစ်ခုအကြားက link ၏အသွင်အပြင်ဆောင်ရွက်မှုတွေ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ချို့ယွင်းစေခြင်းငှါအကြံပြုကုန်သည်များ et al ။ 2003; Volkow et al ။ 2007; Beveridge et al ။ 2008; Pattij et al ။ 2008) ။ ဤအဆိုးကျိုးများအချို့သည်ယခုကြှနျုပျတို့အနှစ်ချုပ်တံ့သောဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်လေ့လာခဲ့ကြသည်။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး acute သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ထိခိုက်စေနိုင်ပြီးကိုလည်းမူးယစ်အခမဲ့ပြည်နယ်အတွက်ထင်ရှားသော persistent ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာချွတ်ယွင်း differential ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းငှါအရာတော်တော်များများအကြောင်းပြချက်များအတွက်အရေးကြီးပါသည်။ ကလူထိုကဲ့သို့သောအရက်နှင့် THC အဖြစ်စိတ်ကျရောဂါ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိနေစဉ်ပထမဦးစွာသူတို့၏တုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုအန္တရာယ်မှာသူတို့ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အခြားသူများနေရာနိုင်သည့်, (DSM-IV 1994) ချို့ယွင်းနိုင်ပါသည်။ ဆနျ့ကငျြ, ထိုကဲ့သို့သောနီကိုတင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးအဖြစ်စိတ်ကြွဆေး acute (မှတ်ဉာဏ်တိုးမွှငျ့ပေးနိုငျMartinez et al ။ 1980; Provost နှင့် Woodward 1991; Levin 1992; Soetens et al ။ 1993, 1995; le Houezec et al ။ 1994; Lee နဲ့ဒေါ် 1995; Levin ရှိမုန် 1998) ။ ဒါကြောင့်လျော့နည်းသွားသိမြင်မှုစွမ်းရည်ကို preexisting နှင့်အတူလူဆက်ဆံဖို့အခက်ခဲဆုံးဖြစ်အံ့သောငှါလည်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကိုပွီးနောကျ, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ (နာလန်ထူနှင့်ကုသမှုအားထုတ်မှုကိုပိုပြီးခက်ခဲသိမြင်မှုစွမ်းရည်ကိုလျော့မည်အကြောင်း, Aharonovich et al ။ 2006; Teichner et al ။ 2001) ။ ကြွက်များတွင်အများအပြားလေ့လာမှုများနှစ်ဦးစလုံး acute နှင့်ရေရှည်ထိတွေ့မှုနှင့်နေကြပြီး, သိမြင်မှုလုပ်ငန်းများကိုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပွီ။ acute, ထိုစိတ်ကျရောဂါမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပိုမိုလူကြီးများထက်မြီးကောင်ပေါက်အယှက်ပုံရသည်။ ရေရှည်ထိတွေ့မှုပြီးနောက်စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမူးယစ်ဆေးများနှင့်တာဝန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အတူ acute မူးယစ် အီသနော or THC (ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာဖို့မောရစ်ရေဝင်္အတွက် Spatial သင်ယူမှုချို့ယွင်းAcheson et al ။ 1998, 2001; cha et al ။ 2006, 2007; Markwiese et al ။ 1998; Obernier et al ။ 2002; Sircar နှင့် Sircar 2005; အဖြူရောင် et al ။ 2000; အဖြူနှင့်အ Swartzwelder 2005; ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု Rajendran နှင့်လှံ 2004) ။ မြီးကောင်ပေါက်လည်းအစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုအနံ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှု (ခုနှစ်တွင်အီသနောသဖြင့်လူကြီးများထက် ပို. ချို့ယွင်းများမှာမြေယာနှင့်လှံ 2004) ။ ရေရှည်ချို့ယွင်းလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူ preexposure ထက်ဆယ်ကျော်သက် preexposure ပြီးနောက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုချို့ယွင်းခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ကြောင်းပြသ အီသနော မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာဆက်ရှိနေသော်လည်းမ 25 ရက်ပေါင်းမှတက်ဘို့အရွယ်ရောက်အီသနောထိတွေ့မှု၏ချုပ်ရာကိုအောက်ပါ (Sircar နှင့် Sircar 2005) ။ အလားတူပင်အရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မှဆယ်ကျော်သက် Pre-ထိတွေ့ပြီးနောက်ပိုပြီးချို့ယွင်းဖြစ်ပါသည် THC (Quinn et al ။ 2008) နှင့်ဒြပ် cannabinoids (Schneider နှင့် Koch 2003; O'Shea et al ။ 2004) အရွယ်ရောက်ပြီးသူ preexposure ထက်။ အဆိုပါချို့ယွင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးခြားနားလေ့လာမှုရှိပါတယ် THC Spatial သင်ယူမှုအတွက် (နှစ်ဦးစလုံးအသက်အရွယ်အတွက် abstinence ၏4ရက်သတ္တပတ်အပေါ်သို့ငျ့သှားcha et al ။ 2007).
ဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့မှု၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအချို့ psychostimulants တုံ့ပြန်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ တိုးချဲ့ပြီးနောက် ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် abstinence, amygdala-မှီခိုသင်ယူမှု (အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-စတင်ခြင်းကြွက်များထက်ဆယ်ကျော်သက်-စတင်ခြင်းအတွက်အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိအာရုံချို့ယွင်းတာဖြစ်ပါတယ်Kerstetter နှင့် Kantak 2007), ဆယ်ကျော်သက်အချို့ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်သက်ရောက်မှုမှကာကွယ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။ ၏သီးခြားလေ့လာမှု, အုပ်ချုပ်ရေး ကိုကင်း အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ (ရေရှည်ကိုကင်း abstinence အပေါ်သို့ပြောင်းပြန်ခဲ့ပြီးသောမောရစ်ရေဝင်္သင်ယူမှုအတွက်လိုငွေပြမှုကိုထုတ်လုပ်Santucci et al ။ 2004) ။ ဒီလေ့လာမှုက, သို့သော်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှိုင်းယှဉ်မရခဲ့ပေ။ ၏ဆနျ့ကငျြ, neurotoxic ဆေးများ စိတ်ကြွဆေး အသက် 41 နှင့် 50 ရက်ပေါင်းတို့အကြားအုပ်ချုပ်လျှင်မောရစ်ရေဝင်္နှင့်စင်စင်နာတီရေဝင်္နှစ်ဦးစလုံးအတွက် Spatial သင်ယူမှုအတွက်သေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်ကြာရှည်လိုငွေပြမှုထုတ်လုပ်ရန် (နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်) ။ 51-60 ရက်ပေါင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးမျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ (Vorhees et al ။ 2005).
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, စိတ်ကျရောဂါမူးယစ်ဆေးဝါးများအီသနောနှင့် THC ထက်မြက်သော ပိုပြီးလူကြီးများထက်မြီးကောင်ပေါက်အယှက်။ အသုံးပြုသူများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိနေစဉ်ဤသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ သိမြင်မှုစွမ်းရည်အပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏စူးရှသောသက်ရောက်မှုများလေ့လာရေးသိကောင်းစရာများပါလိမ့်မယ်။ ရှည်လျားသော-ကြာရှည်ခံ သက်ရောက်မှုမူးယစ်ဆေးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ဟန်: ပဍိပက္ခအစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်သော်လည်းမြဲအရက်၏ဆိုးကျိုးများ, THC နှင့်စိတ်ကြွဆေးများ neurotoxic ဆေးများ, ဖော်ပြထားပါပြီ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကအနာဂတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအားနည်းချက်မြှင့်နိုင်, အထူးသဖြင့်စိတ်ကျရောဂါ, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုကနေကြောင်းကြာရှည်မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းသည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမြှင့်။
Impulse နှင့်အလုပ်အမှုဆောင် function ကို
ကျင်းပေါင်းမကြာခဏချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုတစ်ဦးပျက်ကွက်အဖြစ် conceptualized နေကြသည်: စွဲဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များနေသော်လည်းမူးယစ်ဆေးယူနိုင်ရန်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကအစ (ရှေ့ဆက်စီစဉ်နဲ့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်ပျက်ကွက်Kalivas နှင့် Volkow 2005) ။ စွဲလမ်းအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု၏ဆုံးရှုံးမှု (သဘာဝဆုလာဘ်တုံ့ပြန်အတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အတွက်ပိုလျှံ drive ကိုရန် prefrontal cortex ကနေလျှော့ချ glutamatergic drive ကနေဖြစ်ပေါ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်Kalivas နှင့် Volkow 2005) ။ မြီးကောင်ပေါက်က "ကြီးကြပ်ရေးစနစ်," ဟုအဆိုပါ prefrontal cortex (များ၏လုပ်ဆောင်မှုလျော့ချဖို့လူသိများကြသည်Ernst et al ။ 2006), နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်သောလူသားမြား (နု prefrontal cortical circuitry ရှိLenroot နှင့် Giedd 2006) ။ ဒီအသိမှာတော့ဆယ်ကျော်သက်ပင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုမရှိဘဲ, လစ်လပ်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုရှိစေခြင်းငှါ။ THC (အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာအယှက်မှပြသထားသည်Egerton et al ။ 2005, 2006) ကို prefrontal cortex အပေါ်သို့မှီခိုတာဝန်များကိုအတွက် (McAlonan နှင့်ဘရောင်း 2003), ဒါပေမဲ့ယနေ့အထိထုတ်ဝေခြင်းမရှိစမ်းသပ်ချက်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအသက်အရွယ်တိကျတဲ့ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
Impulse ရှုပ်ထွေးပြီးအယူအဆဖြစ်တယ်, အများဆုံးသုတေသီများမျိုးစုံ domains များ (သို့ခွဲEvenden 1999) ။ ကြွက်များတွင် Impulse အများဆုံးမကြာခဏအလုပ်များကိုသုံးမျိုးသုံးပြီးလုပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာနှောင့်နှေးလျှော့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများငယ်လေးတစ်ချက်ချင်းစစ်ကူနှင့်ပိုကြီးတဲ့အကြားရွေးချယ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တဦးတည်းနှောင့်နှေးလိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များခုနှစ်, ကိုကင်း နှင့် စိတ်ကြွဆေး (ထကြွလွယ်သောရှေးခယျြမှုတိုးမြှင့်နာကျင်မှု et al ။ 2003; ပဲ့ et al ။ 2006; Roesch et al ။ 2007), နှင့်မြင့်မားသောအဘို့အရပ်ကြီးကြွက် အရက် စားသုံးမှု ( သာ. ကြီးမြတ် Impulse ပြလေ့Wilhelm နှင့်မစ်ချယ် 2008) ။ မြီးကောင်ပေါက် (အခြေခံမှာထိုကဲ့သို့သောတာဝန်များကိုပိုမိုထကြွလွယ်သောများမှာAdriani နှင့် Laviola 2003). နီကိုတင်း လူကြီးအတွက်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထိတွေ့မှုဆိုးရွားစွာ (ဒီတာဝန်အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မထိခိုက်ပါဘူးCounotte et al ။ 2009) ။ Impulse ၏နောက်ထပ်ရှုထောင့်ကတော့ fixed ဆက်တိုက်နံပါတ် (FCN) တာဝန်နဲ့ Go ကို / အဘယ်သူမျှမ-go တာဝန်အားဖြင့်လုပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတာဝန်များကိုအနေနဲ့သင့်လျော်သောတဦးတည်းဖျော်ဖြေစဉ်တစ်ခုမလျော်ကန်သောတုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့စွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်ထားသည်။ အီသနော နှင့် စိတ်ကြွဆေး (ထို FCN task ထဲမှာ Impulse တိုးမြှင့်Evenden နှင့်ဦးဖြစ်သူကို 2005; Bardo et al ။ 2006). ကိုကင်း (ထို Go ကို / အဘယ်သူမျှမ-go task ထဲမှာအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးပါဘူးနာကျင်မှု et al ။ 2003) ။ မြင့်မားသောအဘို့အရပ်ကြီးကြွက် အရက် အဆိုပါ Go ကို / အဘယ်သူမျှမ-go တာဝန်အတွက်စားသုံးမှုပြပွဲ သာ. ကြီးမြတ် Impulse (Wilhelm et al ။ 2007) ။ Impulse ၏တတိယအမျိုးအစား (DRL) တာဝန်တုံ့ပြန်၏အနိမ့်မှုနှုန်း၏ differential ကိုအားဖြည့်အတွက်လုပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမော်ဒယ်များအားဖြည့်ရှာကြံမတိုင်မီစောင့်ဆိုင်းရန်စွမ်းရည်။ ကိုကင်း (အာဆင်နယ်နှင့် Wright 1990; Cheng et al ။ 2006), စိတ်ကြွဆေး (အာဆင်နယ်နှင့် Wright 1990), နှင့် အီသနော (Popke et al ။ 2000; Arizzi et al ။ 2003) ကို DRL task ထဲမှာ Impulse တိုးမြှင့်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဇာတ်စင်ကိုယ်တိုင်ကဤဒိုမိန်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောအားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်ကဤအလုပ်များကိုအားလုံးအတွက်မူးယစ်ဆေးဖို့တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်အရေးပါဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။
အမူအကျင့်အစီအမံအတွက် pharmacokinetics ၏အခန်းက္ပ
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအများအပြား pharmacokinetic ဂုဏ်သတ္တိများမှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဦးနှောက်ထဲမှာမူးယစ်ဆေး၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်ရှင်းလင်းရေး၏နှုန်းထားများ (နှင့်၎င်း၏မော်လီကျူးပစ်မှတ်မှာ), အမြင့်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ထိတွေ့မှုများ၏ကြာချိန် (မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စွဲလမ်းသက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရောင်းသူ et al ။ 1989; က de ကျေး et al ။ 1992; Gossop et al ။ 1992) ။ မူးယစ်ဆေးဝါး Euphorigenic သက်ရောက်မှု (ဦးနှောက်အတွက်လျင်မြန်စွာစုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်တိုးမြှင့်နေကြသည်က de ကျေး et al ။ 1992; Abreu et al ။ 2001; နယ်လ်ဆင် et al ။ 2006) ။ ဒီထက်လေ့လာသော်လည်း, ဆန္ဒရှိ, အားဖြည့်ခြင်း, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးသိမြင်သက်ရောက်မှုအလားတူသောဤ pharmacokinetic variable တွေကိုအားဖြင့်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဖြန့်ဝေ၏နှုန်းမှာမူးယစ်ဆေးကိုယ်တိုင်ကခြင်း, ရေးဆွဲရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးရွေးကောက်တော်မူသောလမ်းကြောင်းကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်အလွဲသုံးစားမှုဘုံမူးယစ်ဆေးဆယ်ကျော်သက် pharmacokinetics နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများထိုး, အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်အချိန်ကိုက်မှလေးစားမှုနှင့်အတူကျဲနှင့်မသေးပြည့်စုံဖြစ်ကြသည်။ အများဆုံးသိကောင်းစရာများလေ့လာမှုများအပြိုင်အတွက်အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် pharmacokinetics ဆန်းစစ်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အပြုအမူအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုမူးယစ်ဆေးအဆင့်ဆင့်ကွဲပြားနှင့်ဆက်စပ်သောကြသည်မဟုတ်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။
နီကိုတင်း နှင့်၎င်း၏ metabolite, cotinineလည်း (ဇီဝတက်ကြွစေခြင်းငှါအရာတယ်ရီ et al ။ 2005), (ပိုမြန်ဆယ်ကျော်သက်အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များထက် metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်နေကြတယ်Slotkin 2002) ။ သို့သော်နီကိုတင်းထိုးနှိုင်းယှဉ်ပလာစမာအဆင့်ဆင့်အောင်မြင်ရန်ချိန်ညှိခဲ့သည့်အတွက်နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများအတွက်မြီးကောင်ပေါက်နေဆဲ (ရုပ်သိမ်းရေး၏လျော့ချဆိုင်းဘုတ်များပြO'Dell et al ။ 2006, ခ). အီသနော မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများ (5-30 မိ၏အပိုင်းအခြားအတွင်းအလားတူနှုန်းထားများနှင့်အတိုင်းအတာမှာဦးနှောက်နှင့်သွေးထည့်သွင်းဟန်; Varlinskaya နှင့်လှံ 2006) ဒါပေမယ့် (2-18 ဇ၏အကွာအဝေးကျော်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ကနေထက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမှ ပို. လျှင်မြန်စွာရှင်းလင်းနေသည်Doremus et al ။ 2003) ။ သို့သော်သက်သာခြင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှင်းလင်းရေးအတွက်ခြားနားချက်ဖို့တွေကပေါ်ကနေမဟုတ်ပါဘူး။ Little က et al ။ (1996) ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်လူကြီးများထက်တိုတောင်းတဲ့ကြာချိန်ဘို့မိမိတို့ righting တုံ့ပြန်မှုကိုဆုံးရှုံးပေမယ့်, နိုးထပေါ်၌ပိုမိုမြင့်မားသောအသွေးအရက်အဆင့်ဆင့်ရှိသည်ပြသခဲ့သည်။ အလားတူပဲအီသနောမှ locomotor ာင်းအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု (အသှေးကိုအရက်အဆင့်ဆင့်၏လွတ်လပ်သောများမှာStevenson မှ et al ။ 2008). စိတ်ကြွဆေး (နှိုင်းယှဉ်ဦးနှောက်အာရုံစူးစိုက်မှုရရှိနေသော်လည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ထက်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးပြောင်အတိုင်းအတာအထိ locomotor လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်Zombeck et al ။ 2009) ။ အဘို့ ကိုကင်းတစျအုပျစု (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်လူကြီးများထက် 15 မိ postinjection မှာသွေးနှင့်ဦးနှောက်အတွက်အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ရှိသည်သောလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်ဆက်မက်ကာသီ et al ။ 2004) ။ ဆနျ့ကငျြနောက်ထပ်အုပ်စုတစု (5 မိမှာပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ပြသထားပါတယ်Zombeck et al ။ 2009) လျှော့ချ locomotor ဆွစောင့်ကြည့်နေသော်လည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုသည် (ကျွန်တော်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်တိုးမြှင့် locomotor တုံ့ပြန်မှုလေ့လာတွေ့ရှိသောအချက်နေသော်လည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဦးနှောက်တစ်သျှူးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အသွေး၌အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်အတွက်ညီမျှသောအဆင့်အတန်းကိုတိုင်းတာထားပါတယ်Caster et al ။ 2005) ။ အကျဉ်းချုပ်မှာတော့ဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် pharmacokinetic profile များကိုအသီးသီး၏အစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အသက်အရွယ်-related အပြုအမူကွဲပြားမှုများအတွက်အကောင့်ပါဘူး။
မြီးကောင်ပေါက်မြင့်မားနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုသည်းခံစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သူတို့မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေနှင့်မှီခိုကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏ compulsive ပုံစံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုများပါတယ်ရှိမရှိပြသရန်လုံလောက်သောဒေတာရှိသေးမဟုတ်နိဂုံးမှအမှတ်အထက်အကျဉ်းချုံးအဆိုပါအပြုအမူလေ့လာမှုများ။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုပိုမိုပြည့်စုံသောမော်ဒယ်များနှင့်အတူအပိုဆောင်းလေ့လာမှုများဒီထင်ကြေးအတည်ပြုသို့မဟုတ်ချေပရန်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မူးယစ်ဆေးမှီခို၏မော်လီကျူးများနှင့် neurophysiological အခြေခံတစ်ခုနားလည်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြီးကောင်ပေါက်များတွင်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာသို့မဟုတ်ကျယ်ကျယ်ဖြစ်ပျက်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနတစ်ဦးကကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ဇီဝကမ္မအခြေခံနားလည်သဘောပေါက်မှာပါရည်ရွယ်သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကျယ်ကျယ် (တခြားနေရာပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြRobinson နဲ့ Berridge 1993; 2000; Nestler 1994; Fitzgerald နှင့် Nestler 1995; Nestler et al ။ 1996; Volkow နှင့်မုဆိုး 2000; Koob နှင့် Le Moal 2001; Hyman နှင့် Malenka 2001; Shalev et al ။ 2002; Winder et al ။ 2002; စတိန်းနှင့် Volkow 2002; Kalivas နှင့် Volkow 2005; Yuferov et al ။ 2005; Grueter et al ။ 2007; Kalivas နှင့် O 'Brien 2008) ။ သူတို့ဟာဆယ်ကျော်သက်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအားနည်းချက်ဖျန်ဖြေစေခြင်းငှါ, မော်လီကျူးများနှင့် neurophysiologic ယန္တရားများအကဲဖြတ်များအတွက်မူဘောင်သည်။
အများအပြားကလေ့လာမှုများ (တွေ့မြင် (မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့ differential ကိုအားနည်းချက်အခြေခံအံ့သောငှါမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအကြားမော်လီကျူးများနှင့်ဇီဝကမ္မကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ရှိမရှိစုံစမ်းပြီSchepis et al ။ 2008)) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့။ ယေဘုယျအားဖြင့်မော်လီကျူးများနှင့်ဇီဝကမ္မလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်မှ sensitivity ကိုအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ယန္တရားများထင်ရှားပါပြီ, ဒါပေမယ့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအကူးအပြောင်းနှင့်ဆက်စပ်သော neuroplastic ဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. အထောက်အထားသေးမတည်ရှိပါဘူး။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကနဦးအကြိုးသက်ရောက်မှု dopaminergic အချက်ပြအပေါ်သို့မှီခိုဖြစ်ကြသည်။ မြီးကောင်ပေါက်လျှင်မြန်စွာထိုကဲ့သို့သော dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အဲဒီ receptor စကားရပ် (အဖြစ် presynaptic နှင့် postsynaptic function ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်သောနယ်ပယ်များတွင် dopaminergic neurocircuitry ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းပါပြီSeeman et al ။ 1987; Palacios et al ။ 1988; Teicher et al ။ 1995; Tarazi et al ။ 1998a, b, 1999; Meng et al ။ 1999; ဂူ et al ။ 1999; Andersen က et al ။ 2002; Andersen က 2003, 2005) နှင့်ဦးနှောက်တစ်သျှူးအတွင်း dopamine အကြောင်းအရာ (Andersen က 2003, 2005) ။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများ forebrain ၏ innervation terminal ကိုထိုကဲ့သို့သော dopamine အကြောင်းအရာအဖြစ်အမှတ်အသားများ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဒြပ်အင်ဇိုင်းတွေ၏အဆင့်ဆင့်နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်ဦးအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိအတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကတဆင့်ဆက်လက်ပြသခဲ့ကြသည်။ Postsynaptic အဲဒီ receptor အရေအတွက်ကထိပ်ပြီးတော့ innervation ပြည့်စုံဖြစ်လာအဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ပယ်ချ။ အများစုမှာလေ့လာမှုများ (Synaptic dopamine ၏ Basal အဆင့်ဆင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဤအဆင့်တွင်ကာလအတွင်းအနိမ့်ဖြစ်ကြောင်းပြသAndersen ကနှင့် Gazzara 1993; Badanich et al ။ 2006; Laviola et al ။ 2001; ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု Camarini et al ။ 2008; Cao et al ။ 2007b; Frantz et al ။ 2007) အရာမပြည့်စုံ innervation နှင့်ကိုက်ညီသည်။ မြီးကောင်ပေါက်ကိုလည်းစိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းမှတုန့်ပြန်လွတ်လာ dopamine ၏ပမာဏအတွက်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြား: extracellular dopamine အဆင့်အတွက်ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲမှုလူကြီးများထက်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်သည် (Laviola et al ။ 2001; Walker ကနှင့် Kuhn 2008; ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု Badanich et al ။ 2006; Frantz et al ။ 2007) နှင့်တိုးနှုန်း (ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပိုမိုမြန်ဆန်စေခြင်းငှါBadanich et al ။ 2006; Camarini et al ။ 2008) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေမှာတော့စမ်းသပ်ရလဒ်များကိုများထဲမှအရေးပါသောပစ်မှတ်စမ်းသပ်မှုကောက်ယူခဲ့သည့်မှာအသက်အရွယ်ဖြစ်ပါသည်: အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် dopamine စနစ်များ (နေ့က 28) နှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (နေ့က 42) တွင်သူများအနေဖြင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြပြီးလူကြီးရဲ့အစမှာ (တစ်နေ့တာ 60) ။
မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအကြားဤရွေ့ကား neurobiologic ကွဲပြားခြားနားမှုကိုမကြာခဏအပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်အတူ Concorde မရှိကြပေ။ ဥပမာအားဖြင့်, psychostimulant ာင်း (dopamine အတွက် သာ. ကွီးမွတျတိုးနေသော်လည်းမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာလျော့ချနေသည်Laviola et al ။ 2001; Frantz et al ။ 2007), Conditions ရာအရပျ preference ကို dopamine အတွက်နှိုင်းယှဉ်တိုးနေသော်လည်းမြီးကောင်ပေါက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်သည်အနေဖြင့် (Badanich et al ။ 2006) ။ dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအကြားမာတိကာစောငျ့ရှောကျခဲ့ကွောငျးတစျခုမှာလေ့လာမှု (တစ်ခုခုကိုအတိုင်းအတာမရှိအသက်အရွယ်ကွာခြားချက်အစီရင်ခံFrantz et al ။ 2007).
အလားတူပင်အပြီးအပြတ်ကောက်တွေ့ရှိချက်လည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာမူးယစ်ဆည်းပူးနေရန်မော်လီကျူးများနှင့်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်. အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့နေတဲ့ (ဥပမာက c-fos ကဲ့သို့) ချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇ၏ induction အတွက်ကျဆင်းခြင်း, အခြားမျိုးဗီဇ၏ upregulation နှင့်ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်ဘို့ဆက်လက်ရှိသည့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် Fos B ကကဲ့သို့အသက်တမ်းရှည်ပရိုတိန်း, (များ၏စုဆောင်းခြင်းမှဦးဆောင်Kalivas နှင့် O 'Brien 2008) ။ ဤအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူလိုက်ပါနှင့် cortical circuitry နှင့်ရောဂါဗေဒမူးယစ်ဆေးရှာအခြေခံမှထင်ထားတဲ့ dysregulated glutamatergic အချက်ပြအတွက် Synaptic ပြန်စီစဉ်ဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။ အနည်းငယ်လေ့လာမှုများမြီးကောင်ပေါက် vs. လူကြီးများအတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန်က c-fos ၏ induction လေ့လာကြနှင့်ရလဒ်များကိုအလွန်အမင်း variable ကိုနှင့်ဦးနှောက်ဒေသအပျေါမှီခိုဖြစ်ကြသည်အသုံးပြုသောလှုံ့ဆော်နှင့်ထိုးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ Shram et al ။ အနိမ့်ထိုးပြီးနောက် (0.4 / ကီလိုဂရမ် mg) ထိုလေ့လာတွေ့ရှိသော်လည်းမမြင့်မားထိုး (0.8 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) နီကိုတင်းမြီးကောင်ပေါက် (shell ကို accumbens အဆိုပါ medial နျူကလိယအတွက် သာ. ကြီးက c-fos ထုတ်ဖော်ပြောဆိုShram et al ။ 2007a) ။ အသက်အရွယ်သက်ရောက်မှုများဆင်တူထိုးတိကျတဲ့ကင်းဘို့သတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးလေ့လာမှုများလူကြီးများက high-ထိုး (30-40 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ပြီးနောက်အနည်းငယ် striatal ငျဒသေမှာရှိတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ထက်ပိုပြီးက c-fos စကားရပ် generate ကြောင်းပြသကြ ကိုကင်း (Kosofsky et al ။ 1995; Cao et al ။ 2007b; Caster နှင့် Kuhn 2009) ။ ဆနျ့ကငျြ, မြီးကောင်ပေါက် 10 / ကီလိုဂရမ် Mg (အနိမ့်-ထိုးကင်းတုံ့ပြန်အတွက် dorsal striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens ၏ medial shell ကိုတလျှောက်လုံး သာ. ကြီးမြတ်တုံ့ပြန်မှုရှိသည် ဖြစ်. , Caster နှင့် Kuhn 2009) ။ အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများတွင်သို့သော် fos သော induction ဘို့ (ထိုနှစ်ခုအသက်အရွယ်အကြားဆင်တူသည် နီကိုတင်း amygdala, locus coeruleus, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum, သာလွန် colliculus (Cao et al ။ 2007a; Shram et al ။ 2007a) နှင့်များအတွက် ကိုကင်း အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ (Cao et al ။ 2007b), cortex နှင့် cerebellum (Kosofsky et al ။ 1995)) ။ အဆိုပါ fos ဗီဇ, မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ Fos B က၏တည်ငြိမ်ပရိုတိန်းထုတ်ကုန်ကိုလည်း drug- နှင့်ဒေသ-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ကုသမှုအပျေါမှာအတူ နီကိုတင်းတစျအုပျစု (မျှအသက်အရွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံထားပါတယ်Soderstrom et al ။ 2007) ။ ပြီးနောက် ကိုကင်း or စိတ်ကြွဆေးမြီးကောင်ပေါက်ကို (နျူကလိယ accumbens နှင့် caudate putamen ပိုမိုမြစ်ဝကျွန်းပေါ် Fos B ကဖော်ပြEhrlich et al ။ 2002) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်လက်ရှိလေ့လာမှုများ compulsive မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေရန်အကူးအပြောင်းမှုအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ထင်မော်လီကျူးအပြောင်းအလဲများကိုမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. အပြီးအပြတ်ကောက်ဖြစ်ကြသည်။
ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ၏ရေရှည်အပြုအမူသက်ရောက်မှုဖွယ်ရှိပြောင်းလဲ Synaptic ထိရောက်မှုကကမကထပြုခဲ့ကြသည်အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးယန္တရားများအားဖြင့်အကြောင်းကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် Dendritic Arbore ရေရှည်ပြီးနောက်ပြောင်းလဲနေကြသည် ကိုကင်း နှင့် စိတ်ကြွဆေး ထိတွေ့မှု (Robinson နဲ့ Kolb 2004), ဒါပေမဲ့အဲဒီပွောငျးလဲသေးမြီးကောင်ပေါက် vs. လူကြီးများအတွက်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီမဟုတ်။ ထိတွေ့ပြီးနောက် နီကိုတင်း, dendritic အရှည် differential (ထို prelimbic cortex အတွက်ဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ထိခိုက်နေသည်Bergstrom et al ။ 2008) နှင့်နျူကလိယ accumbens (မက်ဒေါ်နယ် et al ။ 2007) ။ ထိုကွဲပြားမှုများ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှု elucidated ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
Electrophysiological တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်လေ့လာမှုထပ်ခါတလဲလဲကြောင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်စမ်းသပ်အုပ်ချုပ်ရေးပြခဲ့ကြ ကိုကင်း (ထိုနျူကလိယ accumbens အတွက် glutamatergic Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုလျော့ကျစေပါတယ်သောမတ်စ် et al ။ 2001; Schramm-Sapyta et al ။ 2005) နှင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါလျော့ကျစေပါတယ် (Grueter et al ။ 2006) ။ ဤရွေ့ကားပွောငျးလဲ၏ပြောင်းလဲစကားရပ်အဆင့်ဆင့် Parallel α-amino-3-ဟိုက်ဒ-5-methyl-4-ISO-xazole-propionate နှင့် N-methyl-D-aspartic အက်ဆစ် receptors (lu et al ။ 1997, 1999; lu နှင့် Wolf က 1999) ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များကို (နျူကလိယ accumbens အတွက်ယေဘုယျအားဖြင့် plasticity ပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်များမှာSchramm et al ။ 2002) နှင့်တခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင် (Kirkwood et al ။ 1995; Izumi နှင့် Zorumski 1995; Crair နှင့် Malenka 1995; Liao နှင့် Malinow 1996; Partridge et al ။ 2000) လျှပ်စစ်ဆွတုံ့ပြန်ထို့ကြောင့်ကင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဤတိုက်နယ်၏ electrophysiological တုံ့ပြန်မှု Sud မှဆယ်ကျော်သက်လွယ်ကူစွာထိခိုက်တိုးမြှင့်များအတွက်အလားအလာယန္တရားတင်ဆက်ပေမယ့်တိုက်ရိုက်ဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ များစွာသောအခြားအလားအလာယန္တရားများထိုကဲ့သို့သောအချိုမှု receptor စကားရပ် (ဤအချိန်တွင်အရွယ်ရောက် vs. မြီးကောင်ပေါက်အတွက် unexplored ရှိနေဆဲlu et al ။ 1999; lu နှင့် Wolf က 1999) နှင့် chromatin ပြုပြင် (Kumar က et al ။ 2005) ။ အမူအကျင့်လေ့လာမှုများအဖျားဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစတင်ခြင်း compulsive မူးယစ်ဆေးရှာဖို့တိုးတက်မှုအတွက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ကြောင်းထုတ်ဖေါ်လျှင်, ထိုအယန္တရားများစူးစမ်းရပါမည်။
အနာဂတ်လေ့လာမှုများမော်လီကျူးကိုပြောင်းလဲမူးယစ်ဆေးမှီခိုအားအလွန်သက်ဆိုင်ရာသောလိပ်စာမှသက်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်မော်ဒယ်များနှင့်အတူမော်လီကျူးများနှင့်ဇီဝကမ္မလေ့လာမှုများချိတ်ဆက်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအကြားလက်ရှိဖော်ထုတ်ကွဲပြားခြားနားမှု Sud နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုစေခြင်းငှါရှိမရှိမေးမြန်းခြင်းကိုအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှု vs. ကြိုး၏ချိန်ခွင်လျှာအရပျကိုဦးစားပေး, နေရာခြင်းကိုမနှစ်သက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဆုလာဘ်ဆီသို့တင်ရန်နှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်လေ့လာမှုများအရသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်သဖြင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မြီးကောင်ပေါက်တသမတ်တည်းဆုတ်ခွာဆိုးကျိုးများလျော့နည်းထိခိုက်မခံဖြစ်ကြ၏။ ဤသည်အစောပိုင်းအဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကိုရှာ compulsive မူးယစ်ဆေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ကြောင်းနှစ်ဦးစလုံး။
မြီးကောင်ပေါက်တသမတ်တည်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအရေးကြီးတဲ့လေ့လာမှုများမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအားဖြည့်သို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေး locomotor ဆိုးကျိုးများပိုမိုထိခိုက်မခံမရှိကြပေ။
ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သရုပ်ပြလေ့လာမှုများလက်ရှိချို့တဲ့နေကြသည်ပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်, မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်ဖွဲ့စည်းရေးဆုချခြင်းနှင့်အလေ့အကျင့်နှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်အာရုံခံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲလျှက်ရှိပါသည်။
ဒီလေ့လာမှုတွေကမြီးကောင်ပေါက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော "လက်ကျန်ငွေ" ကိုခံစားသည်ဟုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည်ချိန်ခွင်လျှာတိုးမြှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အဘို့အလားအလာအားနည်းချက်ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်တဦးတည်းအရေးပါသောဒြပ်စင် Sud မှဆယ်ကျော်သက်အားနည်းချက်များ၏အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအတွက်ပျောက်နေသည်။ compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ, မူးယစ်ဆေးမှီခို၏အမာခံများဖို့တိုးတက်မှုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဒေတာရှိပါတယ်။ ဒါဟာပိုပြီးအပြည့်အဝမြီးကောင်ပေါက်ကပိုမကြာခဏသို့မဟုတ်လျှင်မြန်စွာလူကြီးများထက်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကိုပိုမိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ယဉ်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ၏မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့် reinstatement ဖို့ရှိမရှိအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအသုံးပြုမှုကိုတိုးတက်ရှိမရှိဖြေရှင်းရန်မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့တိုးတက်မှု၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များစူးစမ်းဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒုတိယအချက်မှာအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုမှအထူးသဖြင့်ဆက်စပ်သိမြင် function ကိုအပေါ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုလေ့လာမှုများ, မျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။ မြီးကောင်ပေါက် vs. လူကြီးများအတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန်မော်လီကျူးကိုပြောင်းလဲတတိယ, လေ့လာမှုများမပြည့်စုံခြင်းနှင့်အပြီးအပြတ်ကောက်ဖြစ်ကြသည်။ ပိုကောင်းတဲ့နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်တီထွင်ဖြစ်လာစွဲဖို့တိုးတက်မှု၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအဖြစ်, ဒီအကူးအပြောင်းအခြေခံမော်လီကျူးကိုပြောင်းလဲ သာ. ကွီးမွတျအတိမ်အနက်အတွက်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ်နှင့်ဤသက်ရောက်မှု၏အလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုတွေဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အနာဂတ်သုတေသနအတွက်အဓိကဦးတည်ချက်အသက်အရွယ်-related နှင့်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုများအကြားလမ်းဆုံဖြစ်ပါတယ်။ လူ့လေ့လာမှုများ (Dawes et al ။ 2000) နှင့်အချို့သောတိရစ္ဆာန်အလေ့လာမှုများ (ဘား et al ။ 2004; ပယ်ရီ et al ။ 2007) မျိုးရိုးဗီဇ, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် psychopathology စွဲ၏အစောပိုင်းမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီဆက်ဆံရေးပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုကိုအလွန်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုအားထုတ်မှုအကျိုးရှိမည်: ငါတို့သည်စွဲဖြစ်လာရန်နှင့်အဘယ်ကြောင့်, ထို့နောက်ကျနော်တို့မခွဲခြားဘဲသူတို့ကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအစပျိုးလာသောအခါ၏အများစုအောင်မြင်စွာသူတွေကိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မူးယစ်ဆေးပြဿနာကိုတားဆီးများနှင့်ဆက်ဆံပါနိုင်ပါတယ်အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်အဘယ်သူသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုငျသောအခါ။
နီကိုးလ်အယ်လ် Schramm-Sapyta, Duke တက္ကသိုလ်, Durham, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား, USA ။
မည်သို့ဒါဝိဒ်သည် Walker က, Duke တက္ကသိုလ်, Durham, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား, USA ။
ယောသပ်သည်အမ် Caster, Duke တက္ကသိုလ်, Durham, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား, USA ။
အက်ဒွပ်ဃ Levin, Duke တက္ကသိုလ်, Durham, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား, USA ။
စင်သီယာအမ် Kuhn, Duke တက္ကသိုလ်, Durham, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား, USA ။
Aberg M က, Wade: D, အမှတ်တရ, E, MDMA ၏ Izenwasser အက်စ် Effect (ecstasy) လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကိုကင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်အခွအေနေအရပျကိုဦးစားပေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်ပေါ်မှာ။ Neurotoxicol Teratol ။ 2007;29: 37-46 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အာဗြဟံသည်, HD, စိတ်ဓာတ်ပြင်ပလူနာတစ်ဦးနမူနာအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါများစတင်ခြင်း၏ Fava အမ်အမိန့်။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999;40: 44-50 ။ [PubMed]
Abreu ME, Bigelow GE, Fleisher L ကို, Walsh SL ။ လူသားတွေအတွက်ကိုကင်းနှင့်ရေအားလျှပ်စစ်-morphone မှတုံ့ပြန်မှုအပေါ်သွေးကြောသွင်းဆေးထိုးမြန်နှုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2001;154: 76-84 ။ [PubMed]
Acheson SK ကို, Stein RM, Swartzwelder HS ။ စူးရှသောအီသနောတို့က semantic နဲ့ကိန်းဂဏန်းများမှတ်ဉာဏ်၏ချွတ်ယွင်း: အသက်အရွယ်-မှီခိုသက်ရောက်မှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 1998;22: 1437-1442 ။ [PubMed]
Acheson SK ကိုရစ်ချတ်ဆင် R ကို, Swartzwelder HS ။ အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းဖမ်းဆီးလွယ်ကူစွာထိခိုက်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ အရက်။ 1999;18: 23-26 ။ [PubMed]
Acheson SK ကို, Ross က EL, Swartzwelder HS ။ အသက်အရွယ်-လွတ်လပ်သောနှင့်ကြွက်များတွင် Spatial မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အီသနော၏ထိုး-တုံ့ပြန်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အရက်။ 2001;23: 167-175 ။ [PubMed]
Adriani W က, Impulse နှင့်အတူလျှော့သောအရပ်အေးစက်၏ Laviola G. အဓာတ်လှေကားအဆင့်ဆင့် d-amphetamine: ကြွက်တွေမှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှစ်ခုအမူအကျင့် features တွေ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2003;117: 695-703 ။ [PubMed]
Adriani W က, Chiarotti က F, Laviola G. အဓာတ်လှေကားအသစ်အဆန်းရှာခြင်းနှင့်ပိုင်ထိုက်သော dအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ periadolescent ကြွက်တွေမှာ -amphetamine ာင်း။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1998;112: 1152-1166 ။ [PubMed]
Adriani W က, Deroche-Gamonet V ကို, Le Moal က M, Laviola, G, Piazza PV ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်အောက်ပါ Preexposure ကွဲပြားခြားနားအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်နီကိုတင်း-ဆုချီးဂုဏ်သတ္တိများသက်ရောက်သည်။ Psychopharmacology (Berl) 2006;184: 382-390 ။ [PubMed]
Aharonovich အီး, Hasin DS, Brooks AC အ, လျူက X, Bisaga တစ်ဦးက, Nunes EV ။ သိမှုလိုငွေပြမှုကိုကင်းမှီခိုလူနာအတွက်အနိမ့်ကုသမှု retention ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2006;81: 313-322 ။ [PubMed]
အာရုံခံစားမှုနှင့်အပြန်အလှန်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive: Aizenstein ML, Segal DS, Kuczenski R. စိတ်ကြွဆေးနှင့် fencamfamine ထပ်ခါတစ်လဲလဲ။ Neuropsychopharmacology ။ 1990;3: 283-290 ။ [PubMed]
American Psychiatric Association ။ စိတ်ရောဂါ (DSM-IV) အတွက် diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလက်စွဲစာအုပ် အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး; Philadelphia တွင်: 1994 ။
Andersen က SL ။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏လမ်းကြောင်း: အခွင့်အလမ်းအားနည်းချက်သို့မဟုတ် window ၏အချက်? neuroscience Biobehav ဗျာ 2003;27: 3-18 ။ [PubMed]
Andersen က SL ။ စိတ်ကြွဆေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 2005;26: 237-243 ။ [PubMed]
Andersen က SL, Gazzara RA ။ neostriatal dopamine လွှတ်ပေးရေး apomorphine-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ၏ ontogeny: အလိုအလျောက်လွှတ်ပေးရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု။ J ကို Neurochem ။ 1993;61: 2247-2255 ။ [PubMed]
Andersen က SL, Teicher MH ။ dopamine receptors နှင့် ADHD သူတို့ရဲ့ဆက်စပ်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2000;24: 137-141 ။ [PubMed]
Andersen က SL, Thompson ကအေပီ, Krenzel အီး, Teicher MH ။ gonadal ဟော်မုန်းအတွက် Pubertal အပြောင်းအလဲများကိုဆယ်ကျော်သက် dopamine အဲဒီ receptor overproduction အခြေခံကြပါဘူး။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002;27: 683-691 ။ [PubMed]
Arizzi MN, ကော်ရဲရားက M, Betz AJ, Wisniecki တစ်ဦးက, Salamone JD ။ အီသနော, acetaldehyde နှင့်ကြွက်များတွင် acetate ၏အနိမ့်ဆေးများ၏ intraventricular ထိုး၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ: အနိမ့်နှင့်မြင့်မားသောနှုန်းကိုအော်ပရေတာအချိန်ဇယားနှင့်အတူလေ့လာမှုများ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2003;147: 203-210 ။ [PubMed]
Babbini M က, Davis က WM ။ စူးရှသောသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲကုသမှုပြီးနောက်မော်ဖင်းအကိုက် locomotor လှုပ်ရှားမှုသက်ရောက်မှုများအတွက်အချိန်-ထိုးဆက်ဆံရေး။ br J ကို Pharmacol ။ 1972;46: 213-224 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Badanich Ka, Adler KJ, Kirstein CL ။ မြီးကောင်ပေါက်နျူကလီးယပ်အတွက် preference ကိုနှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် dopamine septi accumbens ကင်းသောအခြေအနေများအရပျ၌လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2006;550: 95-106 ။ [PubMed]
Balda MA, Anderson က KL, Itzhak Y. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတုန့်ပြန်ကြွက်တွေမှာကင်းဆုလာဘ်များမက်လုံးပေးတန်ဖိုး: အာရုံခံနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase (nNOS) မျိုးဗီဇ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropharmacology ။ 2006;51: 341-349 ။ [PubMed]
Bardo MT, Bevins RA ။ အေးစက်သောအရပ် preference ကို: အဘယျသို့ကမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ preclinical ဥာဏ် add သနည်း? Psychopharmacology (Berl) 2000;153: 31-43 ။ [PubMed]
Bardo MT ကာဣန ME, Bylica Ke ။ အသစ်အဆန်းမှမြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ်အနိမ့်တုံ့ပြန်မှုဖေါ်ပြခြင်းကြွက်များအတွင်းတုံ့ပြန်မှုတားစီးပေါ်တွင်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2006;85: 98-104 ။ [PubMed]
ဘား CS, Schwandt ML, Newman က TK, Higley JD ။ neurobiological, မျိုးဗီဇများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကို: လူ့အရက်စားသုံးမှုပုံစံဆယ်ကျော်သက် nonhuman မျောက်ဝံများ၏အသုံးပြုမှုကို။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004;1021: 221-233 ။ [PubMed]
ခေါင်းလောင်း RL, Rodd ZA, Sable HJ, Schultz ဂျာ Hsu CC ကို, Lumeng L ကို, Murphy က JM, McBride WJ ။ အနီးအနားဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအရက်- သာ. နှစ်သက် (P), ကြွက်များတွင်သောက်သုံးအီသနော၏နေ့စဉ်ပုံစံများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2006;83: 35-46 ။ [PubMed]
Belluzzi JD, Lee က AG က, Oliff HS, Leslie FM ရေ။ locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကြွက်အခြေအနေများအရပျကို preference ကိုပေါ်နီကိုတင်း၏အသက်အရွယ်-မှီခိုသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2004;174: 389-395 ။ [PubMed]
Belluzzi JD, ဝမ် R ကို, Leslie FM ရေ။ Acetaldehyde ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;30: 705-712 ။ [PubMed]
Bergstrom HC, မက်ဒေါ်နယ် CG, ပြင်သစ် HT, Smith က RF ။ စဉ်ဆက်မပြတ်နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေး prelimbic cortex ကနေပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ၏ရွေးချယ်, အသက်-မှီခိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပြောင်းအလဲတချို့ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ synapses ။ 2008;62: 31-39 ။ [PubMed]
Beveridge တီဂျေ, Gill Ke, Hanlon, CA, Porrino LJ ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ ကိုကင်း-related အာရုံကြောများနှင့်လူသားများနှင့်မျောက်တွေကိုသိမြင်မှုချွတ်ယွင်း၏စင်ပြိုင်လေ့လာမှုများ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363: 3257-3266 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bolanos, CA, periadolescent ကြွက်များတွင် dopami-nergic မူးယစ်ဆေးဝါးများမှ Glatt SJ, ဂျက်ဆင်ဃ Subsensitivity: တစ်အပြုအမူနှင့် neurochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1998;111: 25-33 ။
Brenhouse HC, Andersen က SL ။ လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်ကင်းသောအခြေအနေများအရပျကို preference ကို၏အားကောင်း reinstatement နှောင့်နှေး။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2008;122: 460-465 ။ [PubMed]
Brenhouse HC, Sonntag KC, Andersen က SL ။ prefrontal cortex projection အာရုံခံအပေါ်ယာယီ D1 dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုတိုးမြှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience မှဆက်ဆံရေးမျိုး။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 2375-2382 ။ [PubMed]
Brielmaier JM, မက်ဒေါ်နယ် CG, Smith က RF ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်တစ်ခုတည်းနီကိုတင်းဆေးထိုး၏ချက်ချင်းရေရှည်အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ Neurotoxicol Teratol ။ 2007;29: 74-80 ။ [PubMed]
ဘရောင်း TL, Flory K ကို Lynam DR, Leukefeld ကို C, Clayton RR ။ ပုံစံများ, antecedents နှင့်အကျိုးဆက်များ: အာဖရိကန်အမေရိကန်နှင့်ကော့ကေးဆပ်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲနှိုင်းယှဉ်။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2004;12: 47-56 ။ [PubMed]
Brunell SC, လှံ LP ။ pair တစုံ-သျောဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ဒူအီသနောဖြေရှင်းချက်များ၏ဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005;29: 1641-1653 ။ [PubMed]
Burke က JD, Jr က Burke က KC, Rae DS ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ခံစားချက်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်၏စတင်ခြင်းပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခိုများ၏တိုးလာနှုန်းထားများ။ Hosp အဝန်းစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994;45: 451-455 ။ [PubMed]
Buxbaum DM, Yarbrough GG, Carter က ME ။ Biogenic Amin နှင့်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Amin အဆင့်ဆင့်၏အပြောင်းအလဲတချို့ပြီးနောက်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် analgesia နှင့်မော်တာလှုပ်ရှားမှုဗြဲပြုပြင်မွမ်းမံ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1973;185: 317-327 ။ [PubMed]
Camarini R ကို, Griffin WC, 3rd, Yanke AB, Rosalina dos Santos B, သံလွင် MF ။ DBA / 2J ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ extracellular dopamine နဲ့အချိုမှုအဆင့်ဆင့်အပေါ်ကိုကင်းမှဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ဦးနှောက် Res ။ 2008;1193: 34-42 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကမ့်ဘဲလ် Jo, Wood က RD, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ရာအရပျအေးစက်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2000;68: 487-493 ။ [PubMed]
Cao J ကို, Belluzzi JD, Loughlin SE, Keyler DE, Pentel PR စနစ်, Leslie FM ရေ။ Acetaldehyde, ဆေးရွက်ကြီးမီးခိုး၏အဓိကမဲဆန္ဒနယ်, အမူအကျင့်, endocrine ပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်နီကိုတင်းဖို့အာရုံခံတုံ့ပြန်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2007a;32: 2025-2035 ။ [PubMed]
Cao J ကို, Lotfipour S က, Loughlin SE, Leslie FM ရေ။ ကိုကင်း-အထိခိုက်မခံအာရုံကြောယန္တရားများ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးရငျ့။ Neuropsychopharmacology ။ 2007b;32: 2279-2289 ။ [PubMed]
Carr က GD, Fibiger HC, Phillips က AC အ။ မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်အေးစက်သောအရပ် preference ကို။ Liebman JM, Cooper က SJ, အယ်ဒီတာများ in: ။ ဆုလာဘ်၏ neuropharmacological အခြေခံ။ Clarendon, အောက်စဖို့ဒ: 1989 ။ စစ။ 264-319 ။
Caster JM, Kuhn CM ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းကိုကင်းများကညှိနှိုင်းချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်၏ရင့်ကျက်။ neuroscience ။ 2009;160: 13-31 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Caster JM, Walker က QD, Kuhn CM ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲ-ထိုးကင်းဖို့ Enhanced အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု။ Psycho-ဆေးဝါးဗေဒ (Berl) 2005;183: 218-225 ။
Caster JM, Walker က QD, Kuhn CM ။ ကိုကင်းတဲ့တစ်ခုတည်းသောအမြင့်ဆုံးထိုးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးသီးခြားအပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ differential ကိုာင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ Psychopharmacology (Berl) 2007;193: 247-260 ။ [PubMed]
cha YM, White ကလေး, Kuhn CM, Wilson က WA, Swartzwelder HS ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူအပေါ် delta9-THC ၏ differential ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2006;83: 448-455 ။ [PubMed]
cha YM, ဂျုံးစ် KH, Kuhn CM, Wilson က WA, Swartzwelder HS ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် Spatial သင်ယူမှုအပေါ် delta9-tetrahydrocannabinol ၏ဆိုးကျိုးများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2007;18: 563-569 ။ [PubMed]
ကုန်သည်များ RA, တေလာ JR, Potenza MN ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;160: 1041-1052 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ချန် K ကို Kandel DB ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေယေဘုယျလူဦးရေနမူနာများတွင်နှစ်လယ်ပိုင်းသုံးဆယ်မှမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏သဘာဝသမိုင်း။ J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖြစ်၏။ 1995;85: 41-47 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ချန် K ကို Kandel DB, ဒေးဗီးစ်အမ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအကြိမ်ရေနှင့်အရေအတွက်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားပြီးခဲ့သည့်နှစ်က proxy ကိုမှီခိုအကြား။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1997;46: 53-67 ။ [PubMed]
ချန် H ကို, Matta စင်ကာပူဒေါ်လာ, Sharp က BM ။ မူးယစ်ဆေးဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာ access ကိုပေးသည်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသိမ်းယူမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32: 700-709 ။ [PubMed]
Cheng RK, Macdonald CJ, Meck WH ။ အချိန်ခန့်မှန်းချက်အပေါ်ကိုကင်းနှင့်အ ketamine ၏ differential သက်ရောက်မှု: ကြားကာလအချိန်ကိုက်၏ neurobiological မော်ဒယ်များများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2006;85: 114-122 ။ [PubMed]
Collins SL, Izenwasser အက်စ်ကင်း differential အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နှိုင်းယှဉ် periadolescent အတွက်အပြုအမူနှင့် neurochemistry ပွောငျးလဲ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 2002;138: 27-34 ။
Collins SL, Izenwasser အက်စ်နာတာရှည်နီကိုတင်း differential ဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲ။ Neuropharmacology ။ 2004;46: 349-362 ။ [PubMed]
Collins SL, Montano R ကို, Izenwasser အက်စ်နီကိုတင်းကုသမှု periadolescent အထီးမဟုတ်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းမြဲတိုးထုတ်လုပ်သည်။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 2004;153: 175-187 ။
Compton WM, 3rd, Cottler LB, Phelps DL, ဘင် Abdallah ကတစ်ဦး, Spitznagel EL ။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုဘာသာရပ်များအကြားတွင်စိတ်ရောဂါမမှန်: သူတို့မူလတန်းသို့မဟုတ်အလယ်တန်းရှိပါသလဲ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2000;9: 126-134 ။ [PubMed]
Costello EJ, Mustillo S က, Erkanli တစ်ဦးက, Keeler, G, Angold အေပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စိတ်ရောဂါမမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;60: 837-844 ။ [PubMed]
Counotte DS, Spijker S ကိုဗန်က de Burgwal LH, Hogenboom က F, Schoffelmeer AN, De Vries တီဂျေ, Smit AB, ကြွက်များတွင်ဆယ်ကျော်သက်နီကိုတင်းထိတွေ့မှုကနေရရှိလာတဲ့ Pattij တီ Long-ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်လိုငွေပြမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2009;34: 299-306 ။ [PubMed]
Crair MC, Malenka RC ။ thalamocortical synapses မှာရေရှည်အလားအလာများအတွက်အရေးပါကာလ။ သဘာဝ။ 1995;375: 325-328 ။ [PubMed]
Cruz FC အသင်း, Delucia R ကို, Planeta CS ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲနီကိုတင်း၏ differential အမူအကျင့်များနှင့် neuroendocrine ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2005;80: 411-417 ။ [PubMed]
Cunningham MG, Bhattacharyya S ကိုစေလွှတ် FM ရေ။ Amygdalo-cortical ပေါက်အစောပိုင်းလူကြီးသို့ဆက်လက်: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော function ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်။ J ကို comp Neurol ။ 2002;453: 116-130 ။ [PubMed]
Cunningham MG, Bhattacharyya S ကိုစေလွှတ် FM ရေ။ မွေးဖွားနှင့်လူကြီးအကြား GABAergic interneurons နှင့်အတူ amygdalar afferents ၏တိုးပွားလာ Interaction ။ Cereb Cortex ။ 2008;18: 1529-1535 ။ [PubMed]
Dawes MA, Antelman သည် SM, Vanyukov MM, Giancola P ကို, Tarter RE, Susman EJ, Mezzich တစ်ဦးက, Clark က DB ။ ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ဖို့တာဝန်ယူမှုအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2000;61: 3-14 ။ [PubMed]
က de ကျေး H ကို, ကိုကင်း-အားဖြည့်သည့်ကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်၏ Stewart ကဂျေ Reinstatement ။ Psychopharmacology (Berl) 1981;75: 134-143 ။ [PubMed]
က de ကျေး H ကို, Bodker B ကလူသားများအတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုပလာစမာမူးယစ်ဆေးအဆင့်အထိသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏တိုး၏ Ambre ဂျေနှုန်း။ Psychopharmacology (Berl) 1992;107: 352-358 ။ [PubMed]
Depoortere RY လီ DH, ယာဉ်ကြော JD, Emmett-Oglesby မဂ္ဂါဝပ်။ တစ်တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားကိုအောက်မှာကြွက်များတွင်ကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေး parameters ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1993;45: 539-548 ။ [PubMed]
Deroche-Gamonet V ကို, ဘီးလင်း: D, Piazza PV ။ ကြွက်များတွင်စွဲတူသောအပြုအမူများအတွက်အထောက်အထား။ သိပ္ပံ။ 2004;305: 1014-1017 ။ [PubMed]
DeWit DJ သမား, Hance J ကို, Offord DR, Ogborne အေရပ်တန့်နှင့်ဆေးခြောက်-ဆက်စပ်အန္တရာယ်မှတိုးတက်မှုများ၏အန္တရာယ်အပေါ်ဆေးခြောက်အစောပိုင်းနှင့်မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကို၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ prev Med ။ 2000;31: 455-464 ။ [PubMed]
Deykin EY, Levy JC, ဝဲလ် V. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ကျဝေဒနာ, အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု။ J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖြစ်၏။ 1987;77: 178-182 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
di Chiara G. အလှုံ့ဆျောမှုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ၏ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရှုအားပေးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1995;38: 95-137 ။ [PubMed]
Doremus TL, Brunell SC, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်စူးရှသောအီသနောထံမှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း Anxiogenic ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2003;75: 411-418 ။ [PubMed]
Doremus TL, Brunell SC, Rajendran P ကို, လှံ LP ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်မှဆယ်ကျော်သက်ဆွေမျိုးအတွက်မြင့်မားသောအီသနောစားသုံးမှုလွှမ်းမိုးအချက်များ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005;29: 1796-1808 ။ [PubMed]
Earleywine အမ် Hangover အလယ်အလတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်သောက်သုံးရေပြဿနာများအကြားအသင်းအဖွဲ့။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 1993a;18: 291-297 ။ [PubMed]
ရက်နာရောဂါလက္ခဏာနှင့်အတူအရက် covaries များအတွက် Earleywine အမ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအန္တရာယ်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 1993b;18: 415-420 ။ [PubMed]
Egerton တစ်ဦးက, Brett RR, Pratt ဂျေအေ။ တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူမှုအတွက် acute delta9-tetrahydrocannabinol-သွေးဆောင်လိုငွေပြမှု: အကျိုးသက်ရောက်စေတရားရှိဖို့၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;30: 1895-1905 ။ [PubMed]
Egerton တစ်ဦးက, Allison ကို C, Brett RR, Pratt ဂျေအေ။ Cannabinoids နှင့် prefrontal cortical function ကို: preclinical လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2006;30: 680-695 ။ [PubMed]
Ehrlich ME, Sommer J ကို, ကာန, E, Unterwald EM ။ Periadolescent ကြွက်တွေကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးတုံ့ပြန်တိုးမြှင့် DeltaFosB upregulation ပြသပါ။ J ကို neuroscience ။ 2002;22: 9155-9159 ။ [PubMed]
Elliott သည် BM, Faraday MM, Phillips က JM, Grunberg NE ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်နီကိုတင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2004;77: 21-28 ။ [PubMed]
Ernst M က, နယ်လ်ဆင် EE, Jazbec S က, လူယာ eb, ရဟန်းတော် CS, Leibenluft အီး, တိုနီဘလဲ J ကို, ထင်းရူး DS ။ လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens ။ Neuroimage ။ 2005;25: 1279-1291 ။ [PubMed]
Ernst M က, ထင်းရူး DS, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူများ၏ neurobiology ၏ Hardin အမ် Triadic မော်ဒယ်။ Psychol Med ။ 2006;36: 299-312 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Eshel N ကို, နယ်လ်ဆင် EE, တိုနီဘလဲ RJ, ထင်းရူး DS, လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်ရေး၏ Ernst အမ်နှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအလွှာ: အ ventrolateral prefrontal ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် anterior cingulate cortical ။ Neuropsychologia ။ 2007;45: 1270-1279 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Evenden JL ။ Impulse ၏အမျိုးပေါင်း။ Psychopharmacology (Berl) 1999;146: 348-361 ။ [PubMed]
Evenden J ကို, Ko တီကြွက် VIII အတွက်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများ၏ psychopharmacology: တစ် fixed ဆက်တိုက်အရေအတွက်ကိုရှောင်ရှားခြင်းအချိန်ဇယားများကထိန်းသိမ်းထားတုံ့ပြန်အပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏ဆိုးကျိုးများ, methylphenidate နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2005;180: 294-305 ။ [PubMed]
Faraday MM, Elliott သည် BM, Phillips က JM, Grunberg NE ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်နီကိုတင်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှ sensitivity ကိုအတွက်ကွာခြား။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2003;74: 917-931 ။ [PubMed]
Fitzgerald LW, Nestler EJ ။ အီသနောထိတွေ့အောက်ပါအချက်ပြ transduction လမ်းကြောင်းအတွက်မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်။ Clin neuroscience ။ 1995;3: 165-173 ။ [PubMed]
Franken ih, Hendrik VM က။ တရားမဝင်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အစောပိုင်း-စတင်ခြင်း သာ. ကြီးဝင်ရိုး-II ကို comorbidity နှင့်အတူမဟုတ်ဘဲဝင်ရိုး-ငါ comorbidity နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2000;59: 305-308 ။ [PubMed]
Frantz KJ, O'Dell LE, Parsons LH ။ periadolescent နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်းရန်အမူအကျင့်များနှင့် neuro-ဓာတုတုံ့ပြန်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32: 625-637 ။ [PubMed]
Fullgrabe မဂ္ဂါဝပ်, Vengeliene V ကို, ထိုအရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အရက်သောက်အပေါ်စတင်ခြင်းသောက်သုံးမှာအသက် Spanagel R. သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2007;86: 320-326 ။ [PubMed]
Gaiardi M က, Bartoletti M က, Bacchi တစ်ဦးက, Gubellini ကို C, ကော်စတာက M ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်စေဂုဏ်သတ္တိများအဆုံးအဖြတ်အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု၏ Babbini အမ်အခန်းက္ပ: ကြွက်များတွင်နေရာအရပ်နှင့်အရသာအေးစက်လေ့လာမှုများ။ Psychopharmacology (Berl) 1991;103: 183-186 ။ [PubMed]
Gelbard HA, Teicher MH, Faedda, G, Baldessarini RJ ။ ကြွက် striatum အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor ဆိုဒ်များ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1989;49: 123-130 ။
ဂျော့ခ်ျအို Mandyam CD ကို, Wee က S, Koob gf ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ access ကိုကြာရှည် prefrontal Cortex-မှီခိုအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းထုတ်လုပ်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;33: 2474-2482 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စတိန်း RZ, Volkow ND ။ မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား neuroimaging ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;159: 1642-1652 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gossop M က, Griffiths က: P, Powis B, ဘိန်းဖြူ, ကိုကင်းနှင့်အမ်ဖီတမင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှီခိုခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်း၏ထူးဆန်းတဲ့ဂျေပြင်းထန်မှု။ br J ကိုစွဲလမ်း။ 1992;87: 1527-1536 ။ [PubMed]
Grueter BA, Gosnell HB, Olsen CM, Schramm-Sapyta NL, Nekrasova T က, Landreth GE, Winder DG ။ အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် Extracellular-signal ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ် kinase 1-မှီခို metabotropic အချိုမှု receptor 5-သွေးဆောင်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 3210-3219 ။ [PubMed]
Grueter BA, McElligott ZA, Winder DG ။ Group မှငါ mGluRs နှင့်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ: စွဲအတွက်အလားအလာရှိသောအခန်းကဏ္ဍ? Mol Neurobiol ။ 2007;36: 232-244 ။ [PubMed]
Haertzen, CA, Kocher TR, Miyasato ကေစစ်ကူပထမဦးဆုံးမူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံကနေနောက်ပိုင်းမှာမူးယစ်ဆေးအလေ့အထများကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်စွဲနိုင်သည်ကော်ဖီ, စီးကရက်, အရက်, barbiturates, အသေးစားနှင့်အဓိကပဿဒ္ဓိ, စိတ်ကြွဆေး, ဆေးခြောက်, hallucinogens, ဘိန်းဖြူ, opiates နှင့်အတူရလဒျမြားနှငျ့ ကိုကင်း။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1983;11: 147-165 ။ [PubMed]
ပဲ့ CM, ရိဗ် JM, Mitchell က SH ။ inbred ကြွက်တွေမှာ Impulse အပေါ် strain နဲ့ D-စိတ်ကြွဆေး၏သက်ရောက်မှု (အထူးလျှော့စျေးနှောင့်နှေး) ။ Psychopharmacology (Berl) 2006;188: 144-151 ။ [PubMed]
ဟေးလ် SY, Shen က S, L ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ, ဂျွန်လော့ခ်ဂျေရက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဘို့အမြင့်ဆုံးအန္တရာယ်မှာမိသားစုများအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရက်သောက်စတင်ခြင်းခန့်မှန်းအကြောင်းခံအချက်များ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000;48: 265-275 ။ [PubMed]
ဆုလာဘ်အစွမ်းသတ္တိ၏တစ်ဦးအတိုင်းအတာအဖြစ် Hodos ဒဗလျူတိုးတက်ရေးပါတီအချိုးအစား။ သိပ္ပံ။ 1961;134: 943-944 ။ [PubMed]
Hoffman ဟာ JP, စုအက်စ်အက်စ်။ မိဘပစ္စည်းဥစ္စာ variable တွေကိုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဖြန်ဖြေ, ရောဂါကိုအသုံးပြုဖို့: non-တဲ့ request ကိုမော်ဒယ်။ စွဲလမ်း။ 1998;93: 1351-1364 ။ [PubMed]
Hyman SE, Malenka RC ။ စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက်: အမလှူ၏ neurobiology နှင့်၎င်း၏ဇွဲ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2001;2: 695-703 ။ [PubMed]
Infurna RN, လှံ LP ။ စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အရသာဆန္ဒရှိအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1979;11: 31-35 ။ [PubMed]
Izumi Y ကို, Zorumski CF. ကြွက် hippocampal ချပ်၏ CA1 အတွက်ရေရှည်အလားအလာအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ synapses ။ 1995;20: 19-23 ။ [PubMed]
ဂျရုမ်းတစ်ဦးက, Sanberg PR စနစ်။ Non-ဒဏ်ခံကြွက်များတွင် locomotor အပြုအမူအပေါ်နီကိုတင်း၏ဆိုးကျိုးများ: တစ် multivariate အကဲဖြတ်။ Psychopharmacology (Berl) 1987;93: 397-400 ။ [PubMed]
Kalivas PW, ဆန္ဒပြ neuroplasticity တစ်ဦးရောဂါဗေဒအဖြစ် O 'Brien C. မူးယစ်ဆေးစွဲ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;33: 166-180 ။ [PubMed]
Kalivas PW, မော်တာလှုပ်ရှားမှု drug- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အကဲဆတ်ခြင်း Initiative နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ Stewart ကဂျေ Dopamine ဂီယာ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1991;16: 223-244 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Volkow ND ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;162: 1403-1413 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Widerlov အီး, Stanley: D, Breese, G, ရမ် AJ အဆိုပါ mesolimbic system ပေါ်တွင်, Jr Enkephalin အရေးယူ: ။ တစ်ဦး dopamine-မှီခိုနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုတစ် dopamine-လွတ်လပ်သောတိုး။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1983;227: 229-237 ။ [PubMed]
Kantak KM, Goodrich CM, ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်လိင်, estrous သံသရာနှင့်မူးယစ်ဆေး-စတင်ခြင်းအသက် Uribe V. သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (Rattus norvegicus) Exp Clin Psychopharmacol ။ 2007;15: 37-47 ။ [PubMed]
Kerstetter Ka, Kantak KM ။ လှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်သင်ယူမှုအပေါ်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းများ differential ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2007;194: 403-411 ။ [PubMed]
Kirkwood တစ်ဦးက, Lee ကဟောင်ကောင်, ထမ်းရွက် MF ။ ရေရှည်အလားအလာများနှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတွေ့အကြုံအားဖြင့်အမြင်အာရုံ cortex အတွေ့အကြုံ-မှီခို Synaptic plasticity ၏ co-စည်းမျဉ်း။ သဘာဝ။ 1995;375: 328-331 ။ [PubMed]
Knackstedt LA က, Kalivas PW ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ access ကိုမူးယစ်ဆေး-ရစေတယ် reinstatement သော်လည်းမအပြုအမူာင်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2007;322: 1103-1109 ။ [PubMed]
Kolta MG, Scalzo FM ရေ, အလီ SF, Holson RR ။ စိတ်ကြွဆေး-pretreated ကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးဖို့တိုးမြှင့်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု Ontogeny ။ Psychopharmacology (Berl) 1990;100: 377-382 ။ [PubMed]
Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ: hedonic homeostasis ၏ yin နှင့် yang ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1996;16: 893-896 ။ [PubMed]
Kosofsky, Genova LM, Hyman အရှေ့တောင် BE ။ Postnatal အသက်အရွယ်ကြွက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲထဲမှာကိုကင်းများကချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇသော induction ၏တိကျသောသတ်မှတ်ပါတယ်။ J ကို comp Neurol ။ 1995;351: 27-40 ။ [PubMed]
Kota D ကိုမာတင် BR, ရော်ဘင်ဆင် SE, Damaj MI ။ နီကိုတင်းမှီခိုနှင့်ဆုလာဘ်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်အကြားကွဲပြားခြားနား။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2007;322: 399-407 ။ [PubMed]
Kreek MJ, Nielsen DA, Butelman ER, LaForge KS ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲဖို့ Impulse, အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အားနည်းချက်အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှု။ နတ် neuroscience ။ 2005;8: 1450-1457 ။ [PubMed]
Kumar ကတစ်ဦး, Choi KH, Renthal W က, Tsankova မိုင်, Theobald DE, Truong HT, Russo SJ, Laplant မေး, Sasaki TS, Whistler KN, Neve RL, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ Chromatin ပြုပြင် striatum အတွက်ကင်း-သွေးဆောင် plasticity အခြေခံအဓိကယန္တရားသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005;48: 303-314 ။ [PubMed]
မြေယာကို C, လှံ NE ။ အီသနောထိခိုက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမှတ်ဉာဏ်ထားခဲ့ပါကြောင်းဆေးများမှာဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်ရိုးရှင်းသောခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်း။ Neurobiol Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2004;81: 75-81 ။ [PubMed]
Lanier LP သို့ Isaacson RL ။ အဆိုပါ locomotor စိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန်နှင့် hippocampal function ကို၎င်းတို့၏စပ်လျဉ်းအစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ ဦးနှောက် Res ။ 1977;126: 567-575 ။ [PubMed]
Laviola, G, Wood က RD, Kuhn က C, Francis က R ကို, လှံ LP ။ periadolescent နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်းာင်း။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1995;275: 345-357 ။ [PubMed]
Laviola, G, Adriani W က, Terranova ML, လူ့ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များအတွက် psychostimulants မှအားနည်းချက်များအတွက် Gerra G. အ Psychobiological အန္တရာယ်အချက်များ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1999;23: 993-1010 ။ [PubMed]
Laviola, G, Pascucci T က, Pieretti အက်စ် Striatal dopamine ာင်း periadolescent D-စိတ်ကြွဆေးမှမဟုတ်ဘဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များဖြစ်သည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2001;68: 115-124 ။ [PubMed]
le Houezec J ကို, Halliday R ကို, Benowitz NL, Callaway အီး, Naylor H ကို, အရေပြားအောက်ဆုံးနီကိုတင်း၏ Herzig K. တစ်ဦးကနိမ့်ထိုး Non-ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Psychopharmacology (Berl) 1994;114: 628-634 ။ [PubMed]
Lee က Eh, Ma YL ။ ဖက်တမင်းဆေးပြားမှတ်ဉာဏ် retention ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်ကြွက်များအတွင်း hippocampus ထံမှ norepinephrine လွှတ်ပေးရန်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1995;37: 411-416 ။ [PubMed]
Lenroot RK, Giedd ဖြစ်မှု။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: ခန္ဓာဗေဒသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2006;30: 718-729 ။ [PubMed]
Leslie FM ရေ, Loughlin SE, ဝမ် R ကို, ဖာရ L ကို, Lotfipour S က, Belluzzia JD ။ forebrain လှုံ့ဆော်တုန့်ပြန်၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဖှံ့ဖွိုးတိုး: တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004;1021: 148-159 ။ [PubMed]
Levin ED ။ နီကိုတင်းစနစ်များနှင့်သိမြင်မှု function ကို။ Psychopharmacology (Berl) 1992;108: 417-431 ။ [PubMed]
Levin ED ရှိမုန်ကို BB ။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်သိမြင်မှု function ကိုအတွက်နီကိုတင်း acetylcholine ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 1998;138: 217-230 ။ [PubMed]
Levin ED, Rezvani AH, Montoya: D, နှင်းဆီ je, Swartzwelder HS ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လုပ်ပါတယ်ဆယ်ကျော်သက်-စတင်ခြင်းနီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2003;169: 141-149 ။ [PubMed]
Levin ED, လောရင့်အက်စ်အက်စ်, Petro တစ်ဦးက, Horton ကငွေကျပ်, Rezvani AH, Seidler FJ, Slotkin က TA ။ အထီးကြွက်များတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-စတင်ခြင်းနီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး vs. ဆယ်ကျော်သက်: အကျိုးသက်ရောက်၏ကြာချိန်နှင့် differential ကိုနီကိုတင်းအဲဒီ receptor Correlate ။ Neurotoxicol Teratol ။ 2007;29: 458-465 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lewinsohn pm တွင်, Rohde P ကို, Brown က RA ။ ငယ်ရွယ်လူကြီးအတွက်အနာဂတ်ဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များ၏ခန့်မှန်းအဖြစ်လက်ရှိနှင့်အတိတ်ဆယ်ကျော်သက်စီးကရက်ဆေးလိပ်၏ level ။ စွဲလမ်း။ 1999;94: 913-921 ။ [PubMed]
Liao: D, induction အတွက် Malinow R. Deficiency သော်လည်းမငယ်ရွယ်ကြွက်များကနေ hippocampal ချပ်ထဲမှာ LTP ၏စကားရပ်။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 1996;3: 138-149 ။ [PubMed]
Little က PJ, Kuhn CM, Wilson က WA, Swartzwelder HS ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်အီသနော၏ differential ဆိုးကျိုးများ။ အရက် Clin Exp Res ။ 1996;20: 1346-1351 ။ [PubMed]
လိုပက်ဇ်က M, Simpson: D, White က N ကို, Randall C. Age- နှင့်အရက်ထဲမှာလိင်-related ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် C57BL / 6J ကြွက်တွေမှာနီကိုတင်းဆိုးကျိုးများ။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2003;8: 419-427 ။ [PubMed]
lu W က, ME Wolf ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် AMPA အဲဒီ receptor subunit စကားရပ်ပွောငျးလဲနှင့် prefrontal cortex medial ။ synapses ။ 1999;32: 119-131 ။ [PubMed]
lu W က, ချန် H ကို, Xue CJ, ME Wolf ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးကြွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် AMPA အဲဒီ receptor subunits များအတွက် mRNA ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးပွောငျးလဲ။ synapses ။ 1997;26: 269-280 ။ [PubMed]
lu W က, Monteggia LM, ME Wolf ။ ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာ, ကြွက် substantia nigra အတွက် NMDAR1 စကားရပ်လျော့ကျစေပါတယ်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex medial ။ EUR J ကို neuroscience ။ 1999;11: 3167-3177 ။ [PubMed]
Lynskey MT, Heath AC အ, Bucholz KK, Slutske WS, က Madden PA ဆိုပြီး, နယ်လ်ဆင် EC, Statham DJ သမားမာတင် Ng ။ Co-အမွှာထိန်းချုပ်မှု vs အစောပိုင်း-စတင်ခြင်းဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏စက်လှေကား။ Jama ။ 2003;289: 427-433 ။ [PubMed]
အီသနောတို့အပေါ်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်ဆက်စပ်အပြုအမူပြောင်းလဲမှု Majchrowicz အီး induction ။ Psychopharmacologia ။ 1975;43: 245-254 ။ [PubMed]
Maldonado လေး, Kirstein CL ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုဆယ်ကျော်သက်ပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမဟုတ်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ကြိုတင်ကိုင်တွယ်တိုးပွားလာနေသည်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005;86: 568-572 ။ [PubMed]
Mantsch JR, Baker DA, Francis က DM, Katz ES, Hoks MA, Serge JP ။ Stressor- နှင့် corticotropin အချက်-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်တက်ကြွသောစိတ်ဖိစီးမှု-related အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုလွှတ်ကြွက်များအားဖြင့်ရှည်လျား-access ကိုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါလုပ်ခဲ့ပြီးနေကြသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2008;195: 591-603 ။ [PubMed]
Markwiese BJ, Acheson SK ကို, Levin ED, Wilson က WA, Swartzwelder HS ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်မှတ်ဥာဏ်အပေါ်အီသနော၏ differential ဆိုးကျိုးများ။ အရက် Clin Exp Res ။ 1998;22: 416-421 ။ [PubMed]
Martinez JL, Jr, Jensen RA, ရှုပ်ထွေး RB, Vasquez BJ, Soumireu-Mourat B, Geddes: D, Liang KC, McGaugh JL ။ မှတ်ဉာဏ်သိုလှောင်မှုအပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏အလယ်ပိုင်းနှင့်အရံလုပ်ရပ်တွေကို။ ဦးနှောက် Res ။ 1980;182: 157-166 ။ [PubMed]
McAlonan K ကိုဘရောင်း VJ ။ Orbital prefrontal cortex မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်ကြွက်များတွင်ပြောင်းလဲအာရုံစိုက်မှုမပေးထား mediates ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2003;146: 97-103 ။ [PubMed]
ဆက်မက်ကာသီ LE, Mannelli P ကို, Niculescu M က, Gingrich K ကို Unterwald EM, Ehrlich ME ။ ကြွက်တွေမှာကင်း၏ဖြန့်ဖြူးအသက်အရွယ်နှင့် strain အားဖြင့်ကွဲပြားနေသည်။ Neurotoxicol Teratol ။ 2004;26: 839-848 ။ [PubMed]
မက်ဒေါ်နယ် CG, Eppolito AK, Brielmaier JM, Smith က ln, Bergstrom HC, Lawhead MR, Smith က RF ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်မြင့်မားသောနီကိုတင်း-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity အဘို့သက်သေသာဓက။ ဦးနှောက် Res ။ 2007;1151: 211-218 ။ [PubMed]
McDougall လုပ် SA, Duke MA, Bolanos, CA, ခရော CA. ကြွက်များတွင်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း Ontogeny: တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် dopamine agonists ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 1994;116: 483-490 ။ [PubMed]
McGue M က, Iacono WG ကို, Legrand ln, Elkins ဗြဲ Origins နဲ့ပထမဦးဆုံးသောက်မှာအသက်အကျိုးဆက်များ။ II ကို။ မိသားစုအန္တရာယ်နှင့် heritability ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2001a;25: 1166-1173 ။ [PubMed]
McGue M က, Iacono WG ကို, Legrand ln, Malone က S, Elkins ဗြဲ Origins နဲ့ပထမဦးဆုံးသောက်မှာအသက်အကျိုးဆက်များ။ ဗြဲပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူအသင်း disinhibitory အပြုအမူနှင့် psychopathology နှင့် P3 လွှဲခွင်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2001b;25: 1156-1165 ။ [PubMed]
Meng SZ, Ozawa Y ကို, Itoh M က, Takashima အက်စ် Developmental နှင့်အသက်အရွယ်-related dopamine ပို့ဆောင်ရေးစသောအပြောင်းအလဲနှင့်လူ့ Basal ganglia အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999;843: 136-144 ။ [PubMed]
Meyer JM, Neal MC ။ ပထမဦးဆုံးအမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတာဝန်ယူမှုမှာအသက်အရွယ်အကြားဆက်ဆံရေး။ အပြုအမူမျိုးရိုးဗီဇ။ 1992;22: 197-213 ။ [PubMed]
Moghaddam B, prefrontal cortex ကွန်ရက် Homayoun အိပ်ချ်မတူကွဲပြား plasticity ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;33: 42-55 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဂူ DM, Lawler က CP, စာပို့သမား RB, Gilmore JH ။ လူ့ caudate နှင့် putamen အတွက် dopamine D1 အဲဒီ receptor ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း။ Neuropsychopharmacology ။ 1999;21: 641-649 ။ [PubMed]
နယ်လ်ဆင် RA, ဘှိုငျဒျ SJ, Ziegelstein RC, Herning R ကို, Cadet JL, Henningfield je, Schuster CR, Contoreggi ကို C, Gorelick DA ။ လူသားများတွင်သွေးကြောသွင်းကင်း၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်ဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှုအပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနှုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2006;82: 19-24 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မော်လီကျူး neurobiology ။ Neuropsychopharmacology ။ 1994;11: 77-87 ။ [PubMed]
Nestler EJ, Berhow MT, Brodkin ES ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ: signal ကို transduction လမ်းကြောင်းထဲမှာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996;1: 190-199 ။ [PubMed]
Obernier ဂျာ White ကလေး, Swartzwelder HS, သင်္ဘောသား FT ။ သိမှုလိုငွေပြမှုနှင့်ကြွက်များအတွက်4ရက်ကြာမူးရူးအီသနောထိတွေ့ပြီးနောက် CNS ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2002;72: 521-532 ။ [PubMed]
O'Dell LE ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနီကိုတင်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖျန်ဖြေသောအလွှာတစ် psychobiological မူဘောင်။ Neuropharmacology ။ 2009;56 (ပျော့ပျောင်း 1): 263-278 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
O'Dell LE, Bruijnzeel AW, Smith က RT ကို, Parsons LH, Merv ML, Goldberg BA, ရစ်ချတ်ဆန် HN, Koob gf, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင် Markou အေလျော့နီကိုတင်းဆုတ်ခွာ: စွဲမှအားနည်းချက်များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Psychopharmacology (Berl) 2006;186: 612-619 ။ [PubMed]
O'Dell LE, Chen က SA, Smith က RT ကို, Specio SE, Balster RL, Paterson NE, Markou တစ်ဦးက, Zorrilla EP, Koob gf ။ ကြွက်များတွင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian အစီအမံ, ဆုတ်ခွာအစီအမံများနှင့်မျိုးသုဉ်းအပြုအမူ: နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှီခိုစေပါတယ်မှဝင်ရောက်ခွင့်တိုးချဲ့။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2007a;320: 180-193 ။
O'Dell LE, တောရက်စ် OV, Natividad LA က, Tejeda HA ။ ဆယ်ကျော်သက်နီကိုတင်းထိတွေ့အထီးကြွက်များတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနီကိုတင်းထိတွေ့မှုမှဆုတ်ခွာဆွေမျိုးများ၏လျော့နည်းထိခိုက်စေအစီအမံထုတ်လုပ်သည်။ Neurotoxicol Teratol ။ 2007b;29: 17-22 ။
O'Shea M က, Singh က ME, လို့ McGregor, ဆောက်ပုတ် PE IS ။ နာတာရှည် cannabinoid ထိတွေ့မှုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ချွတ်ယွင်းခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမဟုတ်ကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်ထုတ်လုပ်သည်။ J ကို Psychopharmacol ။ 2004;18: 502-508 ။ [PubMed]
နာကျင်မှုက TA, Dringenberg HC, Olmstead MC ။ Impulse အပေါ်နာတာရှည်ကင်း၏ဆိုးကျိုးများ: cortical serotonin ယန္တရားများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2003;147: 135-147 ။ [PubMed]
Palacios JM, စခန်းများမှ M က, Cortes R ကို, လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ Probst အေမြေပုံ dopamine receptors ။ J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm ပျော့ပျောင်း။ 1988;27: 227-235 ။ [PubMed]
Partridge က JG, တန် KC, မေတ္တာရှင် DM ။ အဆိုပါ dorsal striatum အတွက် Synaptic ထိရောက်မှုအတွက်လှုပ်ရှားမှု-မှီခိုရေရှည်အပြောင်းအလဲများဒေသတွင်းနှင့် postnatal သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော။ J ကို Neurophysiol ။ 2000;84: 1422-1429 ။ [PubMed]
Parylak SL, Caster JM, Walker က QD, Kuhn CM ။ Gonadal steroids ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အပြောင်းအလဲများကိုဖျန်ဖြေ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008;89: 314-323 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pattij T က, Wiskerke J ကို, Schoffelmeer AN ။ အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ Cannabinoid မော်ဂျူ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2008;585: 458-463 ။ [PubMed]
Patton GC, McMorris BJ, Toumbourou JW, Hemphill လုပ် SA, Donath S က, Catalano RF ။ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုစတင်ခြင်း။ ကလေးအထူးကု။ 2004;114: e300-e306 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ပယ်ရီ JL, အန်ဒါဆင်ဟာ MM, နယ်လ်ဆင် SE, ကာရိုး ME ။ ရွေးချယ်မြင့်အနိမ့် saccharin စားသုံးမှုများအတွက်မွေးမြူဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်ဃကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသိမ်းယူမှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 2007;91: 126-133 ။ [PubMed]
Pert တစ်ဦးက, Sivit C. Neuroanatomical မော်ဖင်းအကိုက်နှင့် enkephalin-သွေးဆောင် hypermotility ဘို့အာရုံစူးစိုက်။ သဘာဝ။ 1977;265: 645-647 ။ [PubMed]
Philpot RM, Badanich Ka, Kirstein CL ။ အေးစက် Place: အရက်၏အကျိုးနှင့်အဆန္ဒရှိဆိုးကျိုးများအတွက်အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများကို။ အရက် Clin Exp Res ။ 2003;27: 593-599 ။ [PubMed]
Popke EJ, Allen က SR, ပေါလု MG ။ ကြွက်များတွင်သိမြင်မှု-အပြုအမူစွမ်းဆောင်ရည်၏ညွှန်းကိန်းအပေါ်စူးရှသောအီသနော၏ဆိုးကျိုးများ။ အရက်။ 2000;20: 187-192 ။ [PubMed]
Prat, G, သွားလေ၏တစ်ဦးက, ဖာရ-Pamies M က, အရက်ရက်နာ၏ Sanchez-Turet အမ် Neuro-သိမြင်ဆိုးကျိုးများ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2008;33: 15-23 ။ [PubMed]
Prescott, CA, Kendler KS ။ တစ်ဦး noncausal အသင်းအဖွဲ့: အရက်များအတွက်ပထမဦးဆုံးသောက်နှင့်အန္တရာယ်မှာအသက်အရွယ်။ အရက် Clin Exp Res ။ 1999;23: 101-107 ။ [PubMed]
Provost SC, ထို Stroop စမ်းသပ်မှု၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်နီကိုတင်းသွားဖုံး၏ Woodward R. အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 1991;104: 536-540 ။ [PubMed]
Quinn HR, Matsumoto ငါ Callaghan PD, Long က LE, အာနိုး JC, Gunasekaran N ကို, Thompson က MR, Dawson B, ဆောက်ပုတ် PE, Kashem MA, Matsuda-Matsumoto H ကို, Iwazaki T က, လို့ McGregor IS ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များထက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (9) -THC လျော့နည်းခြင်းကိုမနှစ်သက်ထပ်ခါတလဲလဲပေမယ့်ထိတွေ့အောက်ပါ hippocampal ပရိုတိန်းစကားရပ်ထဲမှာ သာ. ကြီးမြတ်ကျန်နေတဲ့သိမြင်လိုငွေပြမှုနှင့်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြရန်ကိုရှာပါ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;33: 1113-1126 ။ [PubMed]
Rajendran P ကို, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် Spatial နှင့် nonspatial မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အီသနောများ၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုစာစားချင်စိတ်ကိုပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာခဲ့သည်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004;1021: 441-444 ။ [PubMed]
Rasmussen K ကို Beitner-Johnson က DB, Krystal JH, Aghajanian GK, Nestler EJ ။ Opiate ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ကြွက် locus coeruleus: အမူအကျင့်, electrophysiological နှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျး Correlate ။ J ကို neuroscience ။ 1990;10: 2308-2317 ။ [PubMed]
Rethy CR, Smith ကသမဝါယမ, Villarreal je ။ မောက်၏ locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဦးနှောက် catecholamines အကြောင်းအရာအပေါ်သို့မူးယစ်ဆေးဝါး analgesics ၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1971;176: 472-479 ။ [PubMed]
Rezvani AH, Levin ED ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နီကိုတင်းနှင့်အရက်မှကွဲပြားခြားနားကိုတုံ့ပြန်: မော်တာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်။ int J ကို Dev မှ neuroscience ။ 2004;22: 349-354 ။ [PubMed]
Ristuccia RC, လှံ LP ။ ထပ်ခါတလဲလဲငွေ့ရှူရှိုက်မိပါအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်အီသနော၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသက်ရောက်မှုမှ sensitivity နှင့်သည်းခံစိတ်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005;29: 1809-1820 ။ [PubMed]
ရောဘတ်, DC, Loh သည် EA ၏, ကင်း၏ Vickers G. အကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်တစ်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်: ထိုး-တုံ့ပြန်မှုကြားဆက်ဆံရေးနှင့် haloperidol pretreatment ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 1989;97: 535-538 ။ [PubMed]
Robin ln, Przybeck TR ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အခြားရောဂါများအတွက်အချက်တစ်ချက်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏စတင်ခြင်း၏ခေတ်။ NIDA Res Monogr ။ 1985;56: 178-192 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းမှု၏စိတ်ပညာနှင့် neurobiology: တစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive အမြင်။ စွဲလမ်း။ 2000;95(ပျော့ပျောင်း 2): S91-S117 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မက်လုံးပေး-sensitive နှင့်စွဲလမ်း။ စွဲလမ်း။ 2001;96: 103-114 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြဿနာများကို။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363: 3137-3146 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ် Kolb ခဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ Neuropharmacology ။ 2004;47(ပျော့ပျောင်း 1): 33-46 ။ [PubMed]
Roesch MR, Takahashi Y ကို, Gugsa N ကို, Bissonette GB ကို, Schoenbaum G. အနောက်သို့ကင်းထိတွေ့မှုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်ပြင်းအားနှစ်ဦးစလုံးမှကြွက်များ hypersensitive စေသည်။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 245-250 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စယ် JM, Newman က SC, Bland RC ။ Edmonton အတွက်စိတ်ရောဂါမမှန်၏ကူးစက်ရောဂါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခို။ Acta Psychiatric Scand ပျော့ပျောင်း။ 1994;376: 54-62 ။ [PubMed]
SAMHSA ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်အမျိုးသားစစ်တမ်း။ SAMHSA; Rockville: 2008 ။
Santucci AC အ, Capodilupo S က, Bernstein J ကို, ဂိုမက်ဇ-Ramirez က M, Milefsky R ကို, Mitchell ကအိပ်ချ်ကိုကင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကြွက်များတွင်အချိန်နှင့်အတူ Reversible လုပ်ဖြစ်ကြောင်းကျန်နေတဲ့မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းထုတ်လုပ်သည်။ Neurotoxicol Teratol ။ 2004;26: 651-661 ။ [PubMed]
Schepis TS, Adinoff B, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစွဲလမ်းမမှန်အတွက် Rao က U. Neurobiological ဖြစ်စဉ်များ။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2008;17: 6-23 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Schneider က M, Koch အမ်နာတာရှည် pubertal မဟုတ်ဘဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူနာတာရှည် cannabinoid ကုသမှု sensorimotor တံခါး, အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်တိုးတက်သောအချိုးတာဝန်အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ချို့ယွင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2003;28: 1760-1769 ။ [PubMed]
Schochet TL, ကယ်လီ AE, Landry CF. ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်နီကိုတင်း၏ထိတွေ့ခြင်း differential အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology (Berl) 2004;175: 265-273 ။ [PubMed]
Schramm NL, Egli RE, Winder DG ။ မောက်နျူကလိယ accumbens အတွက် LTP ကြီးထွားစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ synapses ။ 2002;45: 213-219 ။ [PubMed]
Schramm-Sapyta NL, Pratt AR, Winder DG ။ ကြွက်တွေမှာကင်းအေးစက်သောအရပ် preference ကိုနှင့်မော်တာာင်းအပေါ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုကင်းထိတွေ့မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှ periadolescent ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2004;173: 41-48 ။ [PubMed]
Schramm-Sapyta NL, Olsen CM, Winder DG ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး shell ကို accumbens mouse ကိုနျူကလိယအတွက် excitatory တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;31: 1444-1451 ။ [PubMed]
Schramm-Sapyta NL, မောရစ် RW, Kuhn CM ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များကိုကင်းနှင့် lithium chloride တို့၏အေးစက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ဂုဏ်သတ္တိများကနေကာကွယ်ထားပါသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2006;84: 344-352 ။ [PubMed]
Schramm-Sapyta NL, Cha YM, Chaudhry က S, Wilson က WA, Swartzwelder HS, Kuhn CM ။ differential anxiogenic, ဆန္ဒရှိနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် THC ၏ locomotor ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2007;191: 867-877 ။ [PubMed]
Schwandt ML, ဘား CS, Suomi SJ, Higley JD ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များအတွက်စူးရှသောအီသနောအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါအပြုအမူအတွက်ခေတ်-မှီခိုအပြောင်းအလဲ (Macaca mulatta) အရက် Clin Exp Res ။ 2007;31: 228-237 ။ [PubMed]
Seeman P ကို, Bzowej နယူးဟမ်းရှား, ဂွမ် HC, Bergeron ကို C, et al Becker က LE, Reynolds ကမိသားစုဆရာဝန်, Bird ကို ED, Riederer P ကို, Jellinger K ကိုက Watanabe ကို S ။ ကလေးများနှင့်အိုမင်းလူကြီးများအတွက်လူ့ဦးနှောက် dopamine receptors ။ synapses ။ 1987;1: 399-404 ။ [PubMed]
Segal DS, Vivo microdialysis ခုနှစ်တွင် Kuczenski R. ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေး pretreatment ထုတ်လုပ်အပြုအမူာင်းဖို့သက်ဆိုင်ရာတစ်ဦးလျော့နည်းသွားစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် DA တုံ့ပြန်မှုဖော်ပြသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1992a;571: 330-337 ။ [PubMed]
Segal DS, Kuczenski R. ကင်းအုပ်ချုပ်မှုအမူအကျင့်ာင်း induces နှင့် caudate နှင့် accumbens အတွက် extracellular dopamine တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွားသက်ဆိုင်ရာထပ်ခါတစ်လဲလဲ။ ဦးနှောက် Res ။ 1992b;577: 351-355 ။ [PubMed]
ရောင်းသူ EM, Busto ဦး, Kaplan HL ။ Pharmacokinetic နှင့် pharmacodynamic မူးယစ်ဆေး interaction က: အလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ယူမှုကိုစမ်းသပ်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ NIDA Res Monogr ။ 1989;92: 287-306 ။ [PubMed]
Shaffer HJ, ဟေဗာသည် GB အထိ။ အမေရိကန်အမျိုးသား Comorbidity စစ်တမ်းများတွင်ကင်းမှီခိုလက္ခဏာတွေယာယီတိုးတက်မှု။ စွဲလမ်း။ 2002;97: 543-554 ။ [PubMed]
Shaham Y ကို, Shalev ဦး, Lu က L ကို, De ကျေး H ကို, Stewart ကဂျေမူးယစ်ဆေး relapse ၏ reinstatement မော်ဒယ်: သမိုင်း, နည်းစနစ်နှင့်အဓိကတွေ့ရှိချက်များ။ Psychopharmacology (Berl) 2003;168: 3-20 ။ [PubMed]
Shalev ဦး, Grimm JW, relapse ၏ Shaham Y. Neurobiology ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းရှာမှ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Pharmacol ဗျာ 2002;54: 1-42 ။ [PubMed]
Shram MJ, Funk: D လီ Z ကိုက Le အေဒီ။ Periadolescent နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နီကိုတင်း၏အကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုတိုင်းတာစစ်ဆေးမှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်ကြသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2006;186: 201-208 ။ [PubMed]
Shram MJ, Funk: D လီ Z ကိုက Le အေဒီ။ acute နီကိုတင်းဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ဦးနှောက်၏ဆုလာဘ်-related အလွှာအတွက် differential က c-fos mRNA စကားရပ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ neuroscience လက်တ။ 2007a;418: 286-291 ။ [PubMed]
Shram MJ, Funk: D လီ Z ကိုက Le အေဒီ။ နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်သုဉ်းခြင်းနှင့် reinstatement: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနီကိုတင်းစွဲလမ်းတစ်ဇီဝအားနည်းချက်ဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထား။ Neuropsychopharmacology ။ 2007b;33: 739-748 ။ [PubMed]
Shuster L ကို, Webster GW, ယု G. အမော်ဖင်းအကိုက်-pretreated ကြွက်တွေမှာမော်ဖင်းအကိုက်ရန်ပြေးတုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1975a;192: 64-67 ။ [PubMed]
Shuster L ကို, Webster GW, ကြွက်များတွင်ယု G. အ Perinatal မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲ: မော်ဖင်းအကိုက်ဆွထိခိုက်မခံတဲ့။ စှဲလမျးသူ dis ။ 1975b;2: 277-292 ။ [PubMed]
Shuster L ကို, ယု, G, ဘိတ်အေအသိမြှကြွက်တွေမှာကင်းဆွရန်။ Psychopharmacology (Berl) 1977;52: 185-190 ။ [PubMed]
Shuster L ကို, Hudson J ကို, Anton M က, methylphenidate မှကြွက်၏ Righi ဃအသိ။ Psychopharmacology (Berl) 1982;77: 31-36 ။ [PubMed]
Siegmund S က, Vengeliene V ကို, အဆိုတော်သင်္ဘော MV, ဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်တွေနဲ့ရေရှည်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အရက်သောက်စတင်ခြင်းမှာအသက် Spanagel R. သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005;29: 1139-1145 ။ [PubMed]
Sircar R ကို, ထပ်ခါတလဲလဲအီသနောကုသမှုထိတွေ့ Sircar ဃဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကြွက်အပြုအမူချို့ယွင်းရှိနေဆဲဟုပြသပါ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005;29: 1402-1410 ။ [PubMed]
Slawecki CJ, Roth J ကို, Gilder အေ Neurobehavioral profile များကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်အီသနောဆုတ်ခွာ၏စူးရှသောအဆင့်ကာလအတွင်း။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2006;170: 41-51 ။ [PubMed]
Slotkin က TA ။ နီကိုတင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်: တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်ကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ Neurotoxicol Teratol ။ 2002;24: 369-384 ။ [PubMed]
Snyder KJ, Katovic မိုင်, လှံ LP ။ ကြွက် preweanling အတွက်ကင်းရန်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏အသက်ရှည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1998;60: 909-914 ။ [PubMed]
Soderstrom K ကို Qin W က, Williams က H ကို, တေလာ DA, McMillen BA ဘွဲ့။ နီကိုတင်းအနီးအနားနဲ့ post-မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်း reward- နှင့်မှတ်ဉာဏ်-related ဦးနှောက်ဒေသများအနက်အချို့သာလျှင်အတွင်း FosB စကားရပ်တိုးပွားစေပါသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2007;191: 891-897 ။ [PubMed]
Soetens အီး, D'Hooge R ကို, Hueting je ။ ဖက်တမင်းဆေးပြားလူ့မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးပိုကောင်းစေပါတယ်။ neuroscience လက်တ။ 1993;161: 9-12 ။ [PubMed]
Soetens အီး, Casaer S က, D'Hooge R ကို, Hueting je ။ နှုတ်ပစ္စည်းရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းအပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်။ Psychopharmacology (Berl) 1995;119: 155-162 ။ [PubMed]
လှံကို LP ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2000;24: 417-463 ။ [PubMed]
လှံကို LP သို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲကြွက်များတွင်အုတ်ဂျေကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူ။ ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Biol ပြုမူနေ။ 1979;26: 401-415 ။ [PubMed]
လှံကို LP သို့ Horowitz မိသားစုဆရာဝန်, ကြွက်များတွင် periadolescent ကာလအတွင်းမော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ Lipovsky ဂျေ ALTER အပြုအမူ Response ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1982;4: 279-288 ။ [PubMed]
Stevenson မှ RA, Besheer J ကို, Hodge CW ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ DBA / 2J ကြွက်တွေမှာအီသနော locomotor အကဲဆတ်ခြင်းနှိုင်းယှဉ်။ Psychopharmacology (Berl) 2008;197: 361-370 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Stinus L ကို, Koob gf, လိန်း N ကို, Bloom FE, ventral tegmental ဧရိယာသို့နဲ့အတူ Endorphins ၏ပြုတ်ရည်များကသွေးဆောင်သည် Le Moal အမ် Locomotor activation: opiate-dopamine interaction ကသက်သေအထောက်အထား။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1980;77: 2323-2327 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Swartzwelder HS ရစ်ချတ်ဆင် RC, Markwiese-Foerch B, Wilson က WA, Little က PJ ။ အီသနောမှသည်းခံစိတ်များဝယ်ယူအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု။ အရက်။ 1998;15: 311-314 ။ [PubMed]
ပတ်သာ S ကိုဘရောင်း ll, Crabbe JC ။ စတင်ခြင်းအတွက်အရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမဟုတ်သလိုကြွက်တွေမှာစိတ်ဖိစီးမှုဖို့တုန့်ပြန်မပေမယ့်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်သုံးစွဲမှုထိခိုက်စေမသောက်မှာကျားနှင့်အသက်အရွယ်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008;32: 2100-2106 ။ [PubMed]
Tarazi FI, Tomasini EC, Baldessarini RJ ။ ကြွက် caudate-putamen နှင့်နျူကလိယအတွက် dopamine နှင့် serotonin ပို့ဆောင်ရေး Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ septi accumbens ။ neuroscience လက်တ။ 1998a;254: 21-24 ။ [PubMed]
Tarazi FI, Tomasini EC, Baldessarini RJ ။ ကြွက် forebrain ဒေသများတွင် dopamine D4 ကဲ့သို့ receptors ၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုး: D2 ကဲ့သို့ receptors နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1998b;110: 227-233 ။
Tarazi FI, Tomasini EC, Baldessarini RJ ။ ကြွက် cortical နှင့် striatolimbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင် dopamine D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုး: တစ်ခု autoradiographic လေ့လာမှု။ Dev မှ neuroscience ။ 1999;21: 43-49 ။ [PubMed]
Tarter R ကို, Vanyukov M က, Giancola P ကို, Dawes M က, Blackson T က, Mezzich တစ်ဦးက, Clark က DB ။ ရင့်ကျက်အမြင်: အစောပိုင်းအသက်အရွယ်စတင်ခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ Etiology ။ dev Psychopathol ။ 1999;11: 657-683 ။ [PubMed]
Teicher MH, Andersen က SL, Hostetter JC ။ , striatum အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြား dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကိုအဘို့အ Jr အထောက်အထားသော်လည်းမ accumbens nucleus ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1995;89: 167-172 ။
Teichner, G, Horner MD, Harvey RT ကို။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုလူနာကုသမှုရည်ရွယ်ချက်များ၏ဆည်း၏ Neuropsychological ခန့်မှန်း။ int J ကို neuroscience ။ 2001;106: 253-263 ။ [PubMed]
တယ်ရီ AV စနစ်, Jr ကဟာနန်ဒက်ဇ် CM, Hohnadel EJ, Bouchard က KP, Buccafusco JJ ။ Cotinine, နီကိုတင်း၏ neuroactive metabolite: ချို့ယွင်းသိမှတ်ခံစားမှုပုံမမှန်ကုသမှုအတွက်အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ CNS မူးယစ်ဆေးဗျာ 2005;11: 229-252 ။ [PubMed]
သောမတ်စ် MJ, Beurrier ကို C, Bonci တစ်ဦးက, Malenka RC ။ နျူကလီးယပ်အတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ accumbens: ကင်းရန်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးအာရုံကြော Correlate ။ နတ် neuroscience ။ 2001;4: 1217-1223 ။ [PubMed]
Tirelli အီး, Laviola, G, အမူအကျင့်ထိခိုက်စေဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များတွင် psychostimulants အားဖြင့်သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို၏ Adriani ဒဗလျူ Ontogenesis ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2003;27: 163-178 ။ [PubMed]
Torrella က TA, Badanich Ka, Philpot RM, Kirstein CL, Wecker အယ်လ် Developmental နီကိုတင်းအရပျကိုအေးစက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004;1021: 399-403 ။ [PubMed]
တောရက်စ် OV, Tejeda HA, Natividad LA က, O'Dell LE ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကာလအတွင်းနီကိုတင်း၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှအားနည်းချက် Enhanced ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008;90: 658-663 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Truxell EM, Molina JC, လှံ NE ။ အဆိုပါလူငယ်, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှု: အီသနောမှအသက်အရွယ်နှင့်ကြိုတင်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2007;31: 755-765 ။ [PubMed]
Ujike H ကို, Tsuchida K ကို Akiyama K ကို Fujiwara Y ကို, အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း Kuroda အက်စ် Ontogeny ကင်းရန်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1995;50: 613-617 ။ [PubMed]
Vaidya JG, Grippo AJ, ဂျွန်ဆင် AK, ကြွက်များနှင့်လူသားတွေအတွက် Impulse ၏ Watson ဟာဃတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှု: ဆုလာဘ် sensitivity ကို၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004;1021: 395-398 ။ [PubMed]
Vanderschuren LJ, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးရှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ။ 2004;305: 1017-1019 ။ [PubMed]
Varlinskaya EI, လှံ LP ။ acute အီသနောဆုတ်ခွာ (ရက်နာ) နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်လူမှုရေးအပြုအမူ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2004a;28: 40-50 ။ [PubMed]
Varlinskaya EI, လှံ LP ။ အစောပိုင်းကနေနှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှအီသနော-သွေးဆောင်လူမှုရေးပံ့ပိုးနှင့်လူမှုရေးတားစီးဖို့ sensitivity ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲများ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004b;1021: 459-461 ။ [PubMed]
Varlinskaya EI, လှံ LP ။ Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်အီသနော-သွေးဆောင်လူမှုရေးတားစီးဖို့စူးရှသောသည်းခံစိတ်၏ Ontogeny ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2006;30: 1833-1844 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Vastola BJ, ဒေါက်ဂလပ် LA က, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်နီကိုတင်း-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို။ Physiol ပြုမူနေ။ 2002;77: 107-114 ။ [PubMed]
Vetter CS, Doremus-Fitzwater TL, လှံ LP ။ စဉ်ဆက်မပြတ်, မိမိဆန္ဒအလျောက်-access ကိုအခြေအနေများအောက်တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်မှဆယ်ကျော်သက်ဆွေမျိုးအတွက်မြင့်မားသောအီသနောစားသုံးမှု၏အချိန်သင်တန်း။ အရက် Clin Exp Res ။ 2007;31: 1159-1168 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Vezina P ကို, Leyton အမ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားများတွင်တွေကိုနှင့်လှုံ့ဆော်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးအေးစက်။ Neuropharmacology ။ 2009;56(ပျော့ပျောင်း 1): 160-168 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS ။ စွဲလမ်း, မလှူခြင်းနှင့် drive ကိုတစ်ဦးရောဂါ: အ orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Cereb Cortex ။ 2000;10: 318-325 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Swanson JM, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် Telang အက်ဖ် Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်ကုသမှုဂယက်၏ရလဒ်များကို။ Arch Neurol ။ 2007;64: 1575-1579 ။ [PubMed]
Vorhees CV ကို, ရိဒ် TM, Morford ll, Fukumura M က, Wood က SL, ဘရောင်း, CA, Skelton MR, McCrea AE, ရော့ခ် SL, Williams က MT ။ Periadolescent ကြွက် (P41-50) ပြပွဲ (P21-30) လူငယ် (P31-40 သို့မဟုတ် P51-60) သို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ရေရှည် Spatial နှင့် sequential သင်ယူမှုလိုငွေပြမှုမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်တိုးလာ Neurotoxicol Teratol ။ 2005;27: 117-134 ။ [PubMed]
Walker က QD, Kuhn CM ။ ကိုကင်းတိုးအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များထက် periadolescent ပိုမို dopamine လွှတ်ပေးရန်နှိုးဆွ။ Neurotoxicol Teratol ။ 2008;30: 412-418 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Welzl H ကို, D'Adamo P ကို, Lipp HP က။ တစ်ဦးသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ပါရာဒိုင်းအဖြစ်အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်အေးစက်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2001;125: 205-213 ။ [PubMed]
အာဆင်နယ်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Wright DW ။ ကိုကင်းနှင့်အတူ၎င်း၏အပြန်အလှန်၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ dကြွက်များတွင် -amphetamine နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1990;35: 595-600 ။ [PubMed]
White ကလေး, Swartzwelder HS ။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအတွက်မှတ်ဉာဏ်နှင့်မှတ်ဉာဏ်-related ဦးနှောက် function ကိုအပေါ်အရက်၏အသက်အရွယ်-related ဆိုးကျိုးများ။ မကြာမီက Dev မှအရက်။ 2005;17: 161-176 ။ [PubMed]
White ကလေး, Ghia AJ, Levin ED, Swartzwelder HS ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် Bing ပုံစံအီသနောထိတွေ့: အီသနောမှနောက်ဆက်တွဲတုန့်ပြန်ပေါ် differential ကိုသက်ရောက်မှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2000;24: 1251-1256 ။ [PubMed]
Wilhelm CJ, Mitchell က SH ။ မြင့်မားသောအရက်သောက်ဘို့အရပ်ကြီးကြွက်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာရလဒ်များပိုမိုထိခိုက်မခံဖြစ်ကြ၏။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2008;7: 705-713 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wilhelm CJ, ရိဗ် JM, Phillips ကတီဂျေ, Mitchell က SH ။ အရက်သုံးစွဲမှုအတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်ကြွက်လိုင်းများ Impulse အချို့အစီအမံအပေါ်ကွာခြား။ အရက် Clin Exp Res ။ 2007;31: 1839-1845 ။ [PubMed]
Wilmouth အီး, လှံ LP ။ ယခင်ကနီကိုတင်းနှင့်အတူတွဲအရသာမှဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက် '' ခြင်းကိုမနှစ်သက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004;1021: 462-464 ။ [PubMed]
Wilmouth အီး, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်နာတာရှည်နီကိုတင်းကနေဆုတ်ခွာ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2006;85: 648-657 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Winder DG, Egli RE, Schramm NL, Matthews က RT ကို။ မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ် circuitry အတွက် Synaptic plasticity ။ Curr Mol Med ။ 2002;2: 667-676 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Pharmacol Ther ။ 1987;35: 227-263 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Yokel RA, DeWit အိပ်ချ်အပြုသဘောအားကောင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကြွက်များတွင် apomorphine ထံမှ conditional ခြင်းကိုမနှစ်သက်နှစ်ဦးစလုံး။ သိပ္ပံ။ 1976;191: 1273-1275 ။ [PubMed]
Yuferov V ကို, Nielsen: D, Butelman အီး, Kreek MJ ။ မျိုးဗီဇစကားရပ်ထဲမှာ psychostimulant-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများ Microarray လေ့လာမှုများ။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2005;10: 101-118 ။ [PubMed]
Zakharova အီး, Leoni, G, Kichko ငါ conditional ရာအရပျ preference ကိုနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အထီးကြွက်အပေါ်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းများ၏ Izenwasser အက်စ် Differential ဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2008a;198: 45-50 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zakharova အီး, Wade: D, Izenwasser အက်စ်ထိခိုက်လွယ်မှုကင်းအေးစက်ဆုလာဘ်မှလိင်နှင့်အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပါသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008b;92: 131-134 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zhang က Y ကို, Picetti R ကို, Butelman ER, Schlussman SD, ဟိုတစ်ဦးက, Kreek MJ ။ အမူအကျင့်များနှင့် oxy-codone အားဖြင့်သွေးဆောင် neurochemical အပြောင်းအလဲများကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အကြားကွဲပြားခြားနား။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;34: 912-922 ။ [PubMed]
Zombeck ဂျာ Gupta T က, Rhodes JS ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး C57BL / 6J ကြွက်နှိုင်းယှဉ်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းကနေလျှော့ locomotor ဆွများအတွက် pharmacokinetic အယူအဆ၏အကဲဖြတ်။ Psychopharmacology (Berl) 2009;201: 589-599 ။ [PubMed]